Hanova zavatra | Avy amin'ny Linux
Ny zavatra hiova
Hiverina tsy ho ela aho ...
Iray volana mahery kely nisesy aho taorian'ilay fifanakalozan-kevitra tamin'ny Ubuntuneros ao amin'ilay tranonkala, nanapa-kevitra ny hifindra amin'ny OS X mandritra ny fotoana tsy voafetra aho ary na dia faly 100% amin'ny lafiny sasany aza aho dia tsapako fa tsy manana trano aho ... atsy ho atsy Hampiasako ny Linux ho OS-ko lehibe indray, koa, raha vantany vao lasa ny fahavaratra ary tsy manam-potoana hilalaovana formula 1 2012 (xD) intsony aho.
Ny antony mahatonga an'ity lahatsoratra ity dia tsotra kokoa, te-hanao fitsikerana kely amin'ny Linux aho ary hamela ny lisitry ny faniriako, zavatra antenaiko fa hiova tsy ho ela ary hihatsara ary hahafahan'izy ireo mandresy ireo mpifaninana aminy.
Tsaroako fa herinandro lasa izay dia nilaza tamiko i Metalbyte fa ny fampiasana OS X dia ratsy kokoa noho ny mampiasa Ubuntu, ary angamba eny, raha dinihintsika izany amin'ny fomba fijery filozofika fa tsy azo ampiharina, angamba ny fahazoan-dàlana Apple dia tsy tokony hitomany ... (Nefa avelao hiteny ... ny karnel Darwin dia maimaimpoana toa an'i Linux), fa raha mieritreritra ny fampiasana sy ny fampiharana default isika dia taraiky any aoriana any i Ubuntu, (mihoatra ny OS X ny KDE amin'ny safidy, eny), noho izany dia tiako ny hametraka ny lisitra faniriako amin'ireo zavatra antenaiko ho hita tsy ho ela ao amin'ny Linux:
1) Omeo fanohanana tsy misy kilema amin'ny fanoratana amin'ny litera Japoney, Koreana sns. Ny zavatra tiako be momba ny OS X dia ny fahafahana misafidy hatramin'ny voalohany ny fiteny hanoratana sy hanovana azy mora foana. Ao amin'ny Linux dia azonao atao ihany koa, saingy tsy maintsy mametraka fonosana vitsivitsy ianao ..., izay tsy natapaky ny ovy tamiko mihitsy ny fandehanana ..., raha amin'ity tranga ity dia fantatro fa lesoka 8 XDDDD tsy mety.
2) Mpilalao mozika tsara tarehy sy miasa kokoa. Na dia afaka misintona aza ny iTunes amin'ny solosaina Windows sy ny PC efa tranainy, amin'ny OS X dia matetika dia tsara ny fampisehoana azy, ny tena izy dia tiako ireo mpilalao mozika ireo izay hikarakara bebe kokoa ny interface (ohatra ny tabataba), tsy hadino. mba hanampiana fampiasa, toy ny equalizer, fisintomana rakotra, fivarotana ahafahanao misintona mozika, fahitana rakikira samihafa fa tsy ny fomba fijery mitsivalana mifangaro (clementine, amarok ao anatiny), fivarotana mozika iray, ary ambonin'izany rehetra izany, mila radio aho, radio maro, iraisam-pirenena, jazz, Japoney, mpivavaka, vaovao, fanatanjahantena ... (ampy ny icecast mahazatra ... sy ny sky fm ..., tiako koa ireo radio mpiantsoantso).
3) Fanavaozana ny interface Libreoffice. Eny ..., heveriko fa raha nitady an'ity bilaogy ity isika 2 taona lasa ..., dia hahita olona mangataka fanovana interface tsara, zavatra mbola tsy nitranga mandraka androany ary izay eritreretiko fa tsy hitranga mihitsy. Tsy tiako ho tsara tarehy kokoa ilay interface maimaoffice, fa tiako koa hanamora ny fiainako, indrindra any CALC (nanana olana be aho tamin'ny asa sasany ...), tsy mangataka kopian'ny biraon'ny ms aho, raha ny marina dia afaka mandray naoty aza. ny Iwork amin'ny lafiny sasany.
4) Wayland. Eto isika dia miditra amin'ny lafiny iray izay nahatonga ahy ho tezitra foana tao amin'ny Linux, ny fampiasana xorg. Wayland no ho avy ary antenaiko fa vetivety dia mety ho eo amin'ny toeran'ny birao misy antsika io, ny fampiasana xorg dia tsy manafaka antsika amin'ny triatra raha tsy misy mpamoron-kira (kwin, compiz, compton ..), ary namorona zavatra manelingelina koa eo amin'izy ireo:
1: Rehefa miditra lalao misy vahaolana 1024 x 760 dia ovao ny famahana ny tontolo iainana manontolo fa tsy ny an'ny lalao fotsiny.
2: Raha nianjera ny lalao, imbetsaka ny tontolo iainana dia mijanona amin'ny vahaolana ambany ary tsy maintsy nandeha aho nanova ny vahaolana amin'ny tontonana fanaraha-maso .., saingy indraindray ambany dia ambany ny fanapahan-kevitra ka tsy afaka nanindry ny del key ovay .., satria tsy nety teo amin'ny efijery.
3: Manelatselatra rehefa miovaova avy amin'ny efijery feno mankany amin'ny maody fitaratra, ohatra iray mazava dia rehefa mijery sarimihetsika miaraka amin'ny mplayer ianao ary tampoka dia misy fampandrenesana momba ny kmess na fiaraha-miory.
Wayland dia heverina fa hisoroka ireo zavatra rehetra ireo tsy hitranga.
5) Audio: Jack .., press ..., alsa, efa nandramako daholo izy ireo, efa namboariko daholo izy ireo, ary androany tsy nisy olona afaka nilaza tamiko ny fomba fandraisam-peo ny audio ao anatiny ao amin'ny pc sy ny mikropono miaraka amin'izay, hahafahana manao gameplay ... , ary momba ny pulseaudio dia zavatra ratsy ihany no azoko lazaina.
Na dia mandroso be aza ny pulse amin'ny fampitaovana satria manamora ny fiainana izany, miaraka amina headphone, audio 5.1 sy zava-maniry hafa, amin'ny solosaiko, tsy averiko mihitsy, vita mazava tsara ny feony, tsikaritro foana ilay tabataba ao anaty hira .. ary tsia, tsy olana fikirakirana izany, nanao izay azoko natao aho, nanova ny famerenana ny laoniny, namono ary nampihetsika ny asako arak'ilay torolàlana ao amin'ny Archlinux .., saingy tsy nisy na inona na inona, nahatonga ahy olana bebe kokoa noho ny tombony ankehitriny tsy miresaka momba ny fizotrany amin'ny divay…).
Amin'izao fotoana izao, toa misy mpisera sasany aloan'ny satroka mena hanala baraka izay milaza fa manao ratsy ny pulseaudio… (tompokolahy, fanakianana kely fotsiny…… tsy handratra anay mihitsy izany…, na ireo mpampiasa Apple aza mitaraina amin'ny zavatra maro ao aminy forums).
Tsy manana fitarainana intsony aho, ireo no zavatra tsotra, amin'ny zavatra hafa rehetra inoako fa ny GNU / Linux dia ambony kokoa, azo amboarina, safidy ho an'ireo mpampiasa ..., raha ny marina dia tsy ny lalao akory no ho olana, satria angamba rehetra ny lalao ho an'ny OS X dia ho an'ny Linux (misaotra opengl).
Manantena aho fa afaka herintaona manomboka izao, rehefa jerenao indray ity dia afaka milaza aho fa ny ankamaroany dia zavatra taloha.
Raha misy olona aorian'ity lahatsoratra ity te-ho avy handrehitra na handrehitra flamewar, dia azoko atao ihany ny milaza fa tsy tongasoa izany, tiako ny hiarahanay miresaka momba ireo lafin-javatra ireo ary afaka manome hevitra nefa tsy mikorontana amin'ny renin'iza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Ny zavatra hiova
198 hevitra, avelao ny anao
progdebian dia hoy izy:
Mikasika ny mpilalao iray, tsy very na inona na inona ianao amin'ny fanandramana guayadeque ... Fantatro izy nandritra ny roa taona mahery ... ary tsy manova azy na inona na inona aho ... raha tsy eo am-baravarankely aho ... toy ny amin'izao fotoana izao xD. ... ahh ary ny momba ny fitsikerana tena toa mitombona ... Miarahaba.
Valiny ho an'ny progdebian
Homeko tsiro ianao, misaotra! 🙂
Andramo koa tomahawk sy yarock. Tomahawk dia manana kinova Mac 😉
Tomahawk ho ahy no tsara indrindra;), mila radio fotsiny vao ampiana ary tonga lafatra: '(
Mmm andramo yarock avy eo, manohana an'ity karazana radio ity izy.
* Milalaova onjam-peo (icecast, shoutcast, fisie mpampiasa)
Guayadeque nampiasako nandritra ny fotoana kelikely, ary tiako be koa izy io, ary toa feno tokoa teo amin'ny sehatry ny fampiasa, ny safidy ary izany rehetra izany. Ny hany zavatra tsy naharesy lahatra ahy mihitsy dia ny tranom-boky mozika namindra ahy miadana be rehefa nanana mozika betsaka nampidirina aho.
Ary hatramin'ny nialako tamin'ny KDE dia nifindra tany amin'i Clementine aho, ary faly koa miaraka aminy. Tranga vitsivitsy fotsiny no tsy haiko nefa tsy dia misy lanjako loatra, toy ny fahaizana manao audioscrobbling amin'ny Libre.fm fa tsy ny Last.fm (zavatra malahelo ahy avy any Guayadeque, izay mamela ny roa tonta miaraka).
Ny iray hafa izay tiako be koa tamin'ny fotoanan'ny GNOME2 dia ny gmusicbrowser, ambonin'izany rehetra izany noho ny fahafaha-misafidy mpaka tahaka maromaro ho an'ny mpilalao hafa (toa ny Exaile, Rythmbox ary maro hafa) na dia mpilalao mitovy foana aza amin'ny zavatra hafa rehetra.
Hizaha maso (ary handre) ny hafa izay notononinao ihany koa aho ary mbola tsy haiko 🙂
Andao hojerentsika raha azoko: antsoina hoe "From Linux" ity bilaogy ity ary ny mpanoratra dia mamaritra ny tenany ho "Mino tanteraka aho fa ny openource no vahaolana hampiakatra sy hampiroborobo ny sehatry ny solosaina" ary sendra lahatsoratra iray nosoratan'olona mampiasa Apple aho? Vazivazy?
Manontany tena aho izao… O_O… pandev, Apple? … Tena matotra? O_O
Yoyo dia mpanakanto makiazy kokoa noho izaho XDDDD… .., raha hanonona olona iray eheheheh. Tamin'ny fahavaratra fotsiny aho raha nilalao formula 1 sy antso adidy XD ..., amin'ny volana septambra dia ho hitanao indray aho amin'ny alàlan'ny ar ahahah
Ao an-tanànako dia misy fitenenana manao hoe "raha tsy mety dia aza zarao", ny takolaka (enta-mavesatra, vazivazy, hatsikana) mandeha aminao, aza mialokaloka amin'ny hafa. xD
Lahatsoratra tsara hialana amin'ny "routine", tsy maninona fa bilaogy Linux io, indraindray dia tsara ny mamantatra izay tantanan'ny OS tsy Linux hafa.
Ary, amin'ny ampahany, ho an'i Gabriel sy Sandy.
Mikasika ny baoliko fa, isaky ny misy zavatra hafa ankoatry ny Linux resahina, dia hisy olona hitsambikina ary hiteny toy ny hoe "matotra, hoy ianao ve OsX? oh ... by ... andriamanitra »ampy ny hadalana be loatra, na mampiasa OsX na tsia izy no olany ary tena kely ny zavatra lazainy ao amin'ilay lahatsoratra, manana teboka mahomby toa ny X.org na audio amin'ny maro izy tranga.
Ny tiako holazaina dia amiko, toa tsy dia fohy ny sain'ny olona, ​​mikatona, ny zava-misy tsotra amin'ny fitsikerana olona iray na izay soratany fotsiny satria mampiasa rafitra fiasa hafa izy ireo, avy eo satria mampiasa OsX fotsiny ve izy ireo dia tsy mety ny hevitr'izy ireo? Manelingelina anao ve izany fa mampiasa OsX aho ary maneho hevitra momba ny SL? Tompokolahy, ampy izay, mampihomehy ity, avy eo izy ireo dia miantso ny tenany ho mpiaro ny fahalalahana, saingy tsy avelany hisy olona malalaka handray fanapahan-kevitra tsotra tahaka ny rafitra hampiasaina.
Indrindra ny Sandy anao, avia, tsy toa izany ianao.
Ehm ... miadana ny tovolahy ...
Miombon-kevitra amin'i Nano aho, manana fahalalahana hampiasa sy hizaha toetra ny rafitra fandidiana tadiavin'izy ireo ny olona ary tsy manakana ny tsy hanome hevitra momba ny OS izany. ny milaza fa OsX dia ratsy noho ny Ubuntu.
Tsy misy, noteneniko fotsiny ho sangisangy izy, fa ny faran'izao tontolo izao dia tonga hatramin'ny naha-teny azy, ary fantatsika rehetra fa olona malala-tsaina ho amin'ny fahafatesana izy ..., ary novaliany tamiko izany andianteny XD
Marina ve izay lazain'i nano, ho ahy irery ny zavatra holazaiko dia pandev OsX? Manana varahina tokoa ianao! hehehe
Raha ny marina, ny OSX dia avy amin'ny FreeBSD fa iray amin'ireo olon-dratsy, ka ny lanjan'ny hevitrao dia mavesatra toy ny tranga amin'ny pandev92 (ekeko fa mampiasa kinova Windows ratsy kokoa noho ny kapila fisorohana hisorohana ireo olana fanavaozana tsy ilaina sy birao. ratsy toa an'i Windows 8/7 ihany, fa izaho kosa mampiasa Debian Stable hahafahako mijery izay mitranga eto amin'ny tontolon'ny Debian).
Tsapako fa ny fanatisme amin'ny distro dia miharihary eo amin'ny ankamaroan'ireo mpampiasa ireo, saingy izaho koa dia mihazakazaka amin'ireo mpampiasa GNU / Linux efa zatra mandefitra sy be fandeferana izay tena mahay maneho ny heviny sy manaja ny fanapahan-kevitry ny hafa.
Te-hampiasa Mac aho, saingy noho ny antony ora sy vola dia tsy afaka aho. Na izany na tsy izany, toa manana zavatra maromaro azo araraotina amin'ny FreeBSD taloha izy io, kanefa, ny GNU / Linux dia manana kalitao tsy manam-paharoa. Ny hany zavatra banga dia ireo mpamorona lozisialy maimaimpoana izay mahatakatra fa ny paradigma ankehitriny an'ny mpampiasa mahazatra sy ankehitriny dia tsy ny console, fa ny GUI ary ny maha-azo ampiharina ireo fitaovana.
Wilbert Isaac dia hoy izy:
Ho io ihany ve Nano avy any Tira Ecol?
Valiny tamin'i Wilbert Isaac
Manohitra izany aho, ny fahalalahan'ny lozisialy dia mihoatra ny fahalalahana misafidy sy maneho hevitra.
Miombon-kevitra aminao aho amin'izany. Inona koa, heveriko fa ny fandeferana amin'ireo mpampiasa hafa an'ny tompona So izay matahotra noho ny fanehoan-kevitra voalohany manala baraka azy ireo dia efa very.
Tsy hitako ny maharatsy ny fampiasana zavatra tsy maimaim-poana hafa indraindray. Mety ho tonga mora ampiasaina mihitsy aza izy io mba hahazo aingam-panahy sy hianatra zavatra avy amin'ilay "fahavalo" amin'ny fahitana ny fandehan'ny zava-drehetra ao anaty rindrambaiko mihoatra ny maimaimpoana, ary koa ny tanjona.
Raha ohatra ka miara-miasa amina bilaogy mozika metaly aho, tokony hihevitra ny tenako ho mpihatsaravelatsihy ihany koa aho amin'ny fihainoana mozika andrana, klasika, jazz, feon-kira sns ... ary tsy vy fotsiny ho lohahevitra ao amin'ny bilaogy?
Ary ny zavatra iray dia ny mihaino ianao ary ny iray hafa dia mampakatra fomba mozika hafa ianao
Mode taliban = on ????
Raha ny fahitako azy dia tokony hanana lahatsoratra maro kokoa isika avy amin'ny OS hafa ho an'ny PC ary misy koa ny hafatra avy amin'ny OS ho an'ny finday, tsy maninona, tsara foana ny mamantatra izay ataon'ny hafa.
Ho ahy manokana, OSX dia mankaleo ary hitako fa mavesatra izany ary miaraka amina rindrambaiko maro karazana izay tsy hozakainao ary ho an'ny maro hafa dia misy ireo izay mbola mila mampiasa windows office ary mandoa na mamaky. Ary tsy ilaina intsony ny milaza momba ny kalitaon'ny vokatra vokariny fa mandiso fanantenana ahy bebe kokoa isan'andro, ity farany lazaiko amin'ny fototra mazava satria manana mac roa hiarahan'izy ireo miasa ato amin'ity trano ity aho hampiasaina amin'ny siansa. Ny famaritana azy dia toa lahatsoratra tena tsara ho ahy ary isaorana hatrany noho ny asanareo ry zalahy !! Miarahaba anao Ariki
Thng dia hoy izy:
Miombon-kevitra amin'ny hevitra sasany aho, fa ny hevitra hafa kosa toa hadalana amiko. Manokana indrindra aho dia miombon-kevitra amin'ny feo ao amin'ny linux.
Nanandrana fizarana am-polony maro aho, fanamoriana samihafa ary tonga tamin'ny fehin-kevitra fa izay nanao pulseaudio dia mendrika hotsaraina amin'ny fitsarana heloka bevava iraisam-pirenena noho ny heloka bevava atao amin'ny zanak'olombelona.
Mamaly an'i Thng
ahaha ary miaraka amin'ny sarin'ny sheriff miampanga eheheh :) .., raha mitaraina any an-danitra i pulseaudio ...
Tsy misy ifandraisany amin'ny mpamily ihany koa ve ny feo? Ny tena marina dia tsy mbola nanana olana aho, saingy satria ny headphones, ny mpandahateny ary ny moziko dia efa manana kalitao XD mahazatra
fifangaroana angamba eo amin'ny mpamily sy ny pulseaudio tsy dia manara-penitra = XD mahafaty ...
Manaiky tanteraka ny feo. Iray amin'ireo zavatra vitsy tsy haiko tamin'ny fotoanako taloha sy lavitra Windows, ary mazàna kokoa ho 'mpitia mozika' XD.
Soa ihany, amin'ny lafiny ratsy na "tsy dia tsara loatra" dia tsy dia ratsy loatra izany, noho ny fananako kara-peo tsara faran'izay kely mendrika. Na dia eo amin'ny lafiny fandraketana an-tsary sy zavatra hafa ankoatry ny fihainoana azy aza dia vao mainka maitso. Mba ho mpitendry mozika ao amin'ny GNU / Linux dia tokony ho injenieran'ny solosaina miaraka amin'izay xD ianao.
Nankatoaviko ilay lahatsoratra satria na izany aza, ny hevitry ny mpanoratra momba ny zavatra tokony hatsaraina ao amin'ny GNU / Linux. Saingy, misy zavatra maro tsy azoko:
1- Apetrako amin'ny solosaina findaiko ampiasako any am-piasana i Debian ary tsy dia manana olana aho, izany hoe mametraka aho ary manadino izany. Ny olana angamba dia ny mpanoratra, izany hoe pandev, manova ny fizarana toy ny atin'akanjo anaty under
2- Marina fa tiako fa toa tsara ny rindranasa, saingy ny fahaizan'ny mpilalao audio tsy dia tsara tarehy .. tsy misy antony izany, ary maro ny mpilalao, na amin'ny trano fitahirizana na amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo .. ¿Efa nanandrana ve ianao sipermarse?
Mora dia tsotra sy mahafinaritra tokoa ny mampiasa Windows sy OS X, satria mazava ho azy fa fantatsika rehetra fa manana ny mpamiliny amin'ny tranga Windows izy ireo ary amin'ny tranga OS X, mifantoka amin'ny fanohanana fitaovana manokana fotsiny izy ireo.
Ny torohevitro: Ampiasao ny Intel rehetra, mahalana ny olana mipoitra ... Ary raha tianao ny milalao, dia avelao ny fizarazaran'i Windows sy voila, na tsara kokoa, mividiana console, izay noforonina ho an'izay.
Pandev, mipetraha tsara amin'ny OS X .. Manao veloma ny mpampiasa Linux.
Aza mino amin'ny windows ..., amin'ny windows dia mbola nanana olana bebe kokoa amin'ny audio aho noho ny amin'ny linux miaraka amin'ny pulse, directsound, amin'ny solosaina finday miaraka amin'ny audio intel hda, nanome ahy aretin'andoha ampy izany. ny karazana avela mihantona ary mitabataba toy ny: »NAAAAAAAAAAAGUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU» ary manery anao hamerina ny solosaina pc avy amin'ny bokotra fanidiana .., na dia manana fanohanana be aza ny fikandrana, ity fanohanana fitaovana faharoa ity dia vao mainka mampihomehy ...
Eliasy dia hoy izy:
WTF? F'inona izany resahanao izany? Ahoana no hanoloranao hevitra amin'ny fampiasana windows ho an'ny lalao? raha te handefa linux isika.
Marina amin'ny zavatra rehetra ity lahatsoratra ity. Zahao ireo rindranasa lehibe indrindra
(somary) an'ny rafitra miasa dia ny Player, Office Suite, ary ny lalao. Ireo no zavatra mahasarika ny mpampiasa (Normal). Tsy haiko raha ny fahitako azy.
Heveriko fa marina amin'ny zavatra rehetra izy. Ary heveriko ihany koa fa tsy manaiky fitsikerana ianao. Mampiasa an'i Debian aho ary mila milaza aho fa mety amin'ny zavatra rehetra.
Valiny tamin'i Eliasy
Lahatsoratra tena tsara. Miombon-kevitra aminao aho amin'ny zavatra rehetra :). (Tsy fanesoana io hehe)
Indrindra ao Wayland sy Pulseaudio.
Ny marina dia, mieritreritra aho fa alohan'ny hangatahana fanavaozana ny maso ao amin'ny LibreOffice, tokony hifantoka amin'ny famolavolana ny fahombiazany sy ny mifanentana aminy izahay izahay (ary io farany io no lakilen'ny mpampiasa maro hampiasa azy io, amin'ny rafitra rehetra).
Manaiky ny momba an'i Pulseaudio aho, Wayland dia resaka miandry kely fotsiny ny hahatongavany… Ary faly miaraka amin'i Clementine aho.
Milaza aho fa ny fampifanarahana ny LibreOffice sy ny M. Office dia tokony ho any amin'ny helo (mamela ny teny) Fa maninona no mitady hifanaraka rehefa mitady hanavao ny ekipan'ny LibreOffice dia tokony hanatsara kokoa ny endrika ODT hahatonga mpampiasa vaovao amin'ity birao ity. raiki-pitia amin'izany ary soloo M. voafaritra tsara fa ny rakitra doc, ny format docx na izay tian'i Microsoft hiantsoana azy amin'ny ho avy dia vita kely (kotsa, tain-tsoavaly, poop, sns.) alohan'ny ODT. Ireo ao amin'ny LibreOffice dia mandany fotoana be dia be amin'ny fitadiavana fifanarahana amin'ny suite Microsoft rehefa tokony hanaloka azy amin'ny endrika vaovao sy tsara kokoa noho ireo izay ananany ary mamela ny fifanarahana any aoriana, ilaina ny mamadika ny LibreOffice ho lasa KDE raha ampitahaina amin'ny interface Windows sy OsX . Eny, izany ny hevitro manetry tena, tsy haiko izay eritreritrareo.
pandev92: nametraka osx tamin'ny PC ve ianao? Te hanandrana aho, manana ny niresh iso alaina aho fa tsy haiko raha rehefa apetrakao aho dia ho afaka mitazona ny fizarazaran'i Windows ary afaka mampiasa azy amin'ny dualboot. Raha vao mametraka aho dia mametraka grub, ho afaka hanomboka amin'ny roa ve aho? Misaotra anao
Eny, saingy tsy afaka manome fanampiana anao amin'ny bilaogy linux aho, toa tsy fanao amiko XD…, raha mampiasa google ianao dia misy torolàlana tsara momba ny fametrahana azy raha manana fitaovana mety ianao.
Osx mangataka anao hisaratsaraka amin'ny gpt .., ka raha ny tokony ho izy dia mieritreritra aho fa very windows ..., azafady mba ampiasao ny google> ____ <, tsy nisy nanampy ahy ary nanao izany aho.
Ny nahasosotra ahy momba ny OSX dia ny interface Aqua -ny nandany horonantsary betsaka kokoa noho ny Windows Aero tenany, ary na dia izany aza, tsy nitaraina momba izany ireo mpanamboatra.
Na eo aza izany, sahirana aho amin'ny fampiharana apetrak'ireo fanboy sasany izay tsy mahay manaja ireo mpampiasa hafa amin'ny sehatra hafa noho ny GNU / Linux izay mitsidika anay eto.
Tehaka compadre, ary io zazalahy kely io ve dia mpanafika lehibe, Andriamanitra tsy misy fomba hanakanana ny lahatsorany? maharikoriko ny olona.
Izay nampitandrina dia tsy mpamadika, efa nampitandrina anao aho.
Zazalahy matotra HAhahaha.
🙂 Eny, fa ampiharo ny tantara, satria ratsy kokoa noho ny fofona poof ny fanao. 🙂 Heveriko fa tsy maintsy eo anelanelan'ny 12 sy 13 taona ianao ary fap fap tontolo andro manoloana ny pc.
Trolling iza? inona? Ankehitriny ny trolling dia milaza aminao ny marina? manana hevitra hafa noho ny anao? Mandrosoa, raha ny resaka, ny hevitrao dia tsy mihoatra ny puber firenena sasany izay mampiasa solosaina voalohany, saingy mazava ho azy fa ianao no fanafody manasitrana amin'ny computing, sa tsy izany? hahahaha, ndao hojerentsika raha farafaharatsiny mianatra manoratra lahatsoratra toa ireo mpanoratra hafa ato amin'ity tranonkala ity ianao, hanombohana amin'ny fari-pahaizana efa voaofana sy efa lehibe.
Raha manohy ianao dia manome tombony lehibe ahy ho voarara, hoy hatrany ianao.
Hahaha ary nahoana izy ireo no handrara ahy zazalahy? milaza ny marina aminao? Na izany na tsy izany, ny zavatra tokony hataon'izy ireo dia ny manakana anao tsy hanoratra lahatsoratra mahatsikaiky toy izany, mahazatra ny zaza capricious.
Noraran'izy ireo ianao noho ny mahasosotra, manelingelina, mino fa manana ny marina tanteraka ianao, misavoritaka amin'ireo tonian-dahatsoratra matetika, ary raha fintinina, mpiasa mifehy tena :). Hisafidy ny tsy hiraharaha anao aho mandra-pandràra anao. 🙂
Raha ny tena izy dia tsy haiko ny antony anaovako ny valin-teninao, raha samy "post" anao (raha azo iantsoana izany) sy ny hevitrao dia mihetsika, tsy misy fifamaliana ary kely kokoa ny fandraisana anjara, tsy haiko hoe maninona ianao no mihetsika toy ny injeniera miaraka amin'ny dokotera avy amin'ny MIT rehefa mampiseho ny tantrums-nao fotsiny ianao amin'ny maha zaza simba anao dia manala baraka ny hafa ianao.
Mino foana ilay mpangalatra fa samy manana ny toe-pahasalamany ny tsirairay 😀
Voaporofo ara-tsiansa fa zaza ianao.
io lazaiko io ihany, SIR
JAjajaj yayaya ianao dia olona ovy ary amin'ny alàlan'ny fahalalanao miteny anglisy, karazana capo, raha fintinina dia manantena aho fa efa namaky zavatra tsara ianao mba hanandramanao hianatra zavatra amin'ny fiainana, mandra-pahatongany.
Tohizo amin'ny circus izay mahafinaritra ahy 😀
Fotoanan'ny Troll izao !!!
Amiko toa afaka mamela ny lohahevitra sahady izy ireo. Araka ny nolazaiko foana dia mivoaha ary hamaha azy amin'ny alàlan'ny Hangouts, Yahoo Messenger ... na mitovy amin'izany. Mba miangavy re!
Azafady azafady @elav fa tsy manampy ankizy amin'ny gmail na zavatra hafa toa izany aho, ampy ho ahy ny fijanonan'ny mpilalao sasany ny filokana toa an'io lehilahy io, amin'ny lahatsoratra rehetra izay tsy milaza hoe "ny windows no tsara indrindra, ballmer no mpaminany ary ny vavahadin'i Bill dia andriamanitra.
Tahaka ny angatahana ahy hanaja ny olona rehefa milaza azy ireo aho, dia mangataka mba hajain'ireto olona ireto, izay mino fa manana ny marina tanteraka izy ireo ary mino fa manan-jo hanala ny hevitry ny hafa izy ireo.
Misaotra @elav noho namela trolling betsaka kokoa noho ny amin'ny muylinux.
Amin'ny fanajana feno fanajana Elav ny namanao dia zazalahy kely mihetsiketsika izay mieritreritra fa izy no manacea amin'ny computing, heveriko fa ny reniny no omena tsiny fa mino be dia be izy, tsy fantatro ny antony avelan'izy ireo hanoratra ny hetahetany sy ny hadalany. mamaky lehilahy tsy sariaka toy izany, arahaba.
Ary satria tsy hijanona ity adin'akoho ity mandra-pahafatin'ny iray amin'ireo roa ireo, dia aleoko ity ady ity dia atao any amin'ny saha nanaovana azy: ny forum. Farafaharatsiny mba tsy tototry ny pejy ny fanehoan-kevitra ary ny hafatra tsirairay dia mety ho voatonona mora kokoa noho ny fanoratana blockquote amin'ny hevitr'ity bilaogy natao tamin'ny WordPress ity (ary tokony ho fantatrao ihany koa fa ny WordPress dia tsy mailaka loatra hanodinana an'ity karazana data toa an'i Drupal ity, ka mahaiza mandanjalanja amin'ny admin).
mazava ho azy mazava ho azy, araka ny nolazain'i maradona taminao, "fa manohy mitsentsitra azy ianao." cocolio
Pffta zaza, tena tsy haiko ny fomba fikirakinao azy, ahoana ny fihoaranao ……
Hahahaha izao, hamaly anao iray hafa avy any MaraCona aho izay mifanaraka tsara aminao
AZO ATY AMBONY !!!!!
fanintelony: mazava ho azy, araka ny nolazain'i Maradona taminao, "fa manohy mitsentsitra azy ianao." cocolio
jereo raha te hanana ny zava-drehetra mora ianao mametraka Linux Mint miaraka amin'ny kanelina na Mate sy voila, fa ampiasao ny Apple .. Azafady, inona no hovakina etsy ambony miaraka amin'ireo fialan-tsiny voalaza .. 🙂
Na aiza na aiza no nilazako fa ny olako dia mora ny zava-drehetra, niresaka olana ara-teknika (horonan-tsary sy feo) ary endrika ivelany (mpitendry mozika) aho.
Ho an'ny disto mora dia manome soso-kevitra ny linux deepin vaovao aho.
Ary tsia, tsy mampiasa paoma aho noho ireo olana ireo, ampiasaiko izany satria te hilalao aho ary mandà ny fametrahana windows mba hilalao formula 1 sy kal of duty.
Rehefa tapitra ny fialantsasatro dia hampiasa arko toy ny mahazatra aho.
Eny, tsara: D .. Mbola mieritreritra aho fa tsy haharitra roa volana miaraka amin'i Apple ianao satria hahagaga anao ny fetrany: D .. Ankafizo ny lalao amboadia ary tadidio fa miaraka amin'ny divay, Playonlinux ary Steam dia afaka milalao ihany koa ianao 🙂
Aleoko Steam noho ny mitomany ny fetra omen'ny divay ahy. Na izany na tsy izany, mbola mampiasa Windows aho hahafahako manao ny asako amin'ny rindrambaiko manana (CorelDraw, Illustrator, Dreamweaver ...), saingy tiako ho ampianarin'i Krita, GIMP, Inkscape, Bluefish, ary programa hafa momba ny famolavolana maimaimpoana. , saingy indrisy fa any Però dia lasa miorim-paka tanteraka amin'ny rindrambaiko manana.
Linuxero iray izay lasa any Mac?
Fikomiana be !!! mandrehitra jiro, manomboka ny fihazana !!! ¬_¬
ary soraty amin'ny mac XDDD .., mac mini AHHAHAHAHAHA
Manu Rincon dia hoy izy:
Matahotra aho fa mampihomehy ilay fanehoan-kevitra 🙂
Valiny tamin'i Manu Rincón
Efa tsapako izany xD rehefa namaly aho, tsy misy atahorana.
[fanesoana] Moa ve tafiditra ao koa ireo mpanitsika an'i Steve Ballmer? Satria mampiasa Windows Vista [/ sarcasm] aho.
Tsy dia miombon-kevitra firy momba ny mpilalao aho, ny VLC no tsara indrindra amin'ny farany misy. Mikasika ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny samy mpampiasa fotsiny amin'ny fampiasana disos na DE isan-karazany dia misy olana lehibe ao amin'ny Linux: ny fizarazarana, fa ny an'ny mpampiasa kosa dia ampahany betsaka fa tsy mandray anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny torohevitra na fanampiana fotsiny hanokanana ny tenany hiresaka. Amin'ny fomban'ny fanboy madio indrindra momba ny distro, fandaharana hanatanterahana asa X na DE no tsara kokoa, firy ny fanboy an'ny KDE, Debian, Archlinux, Ubuntu, sns izay mbola tsy tazana eto na amin'ny toerana hafa fotsiny amin'ny fikasana hanipy azy * ny hafa satria (hanome ohatra) ny mpampiasa Archlinux X dia mahatsapa ho ambony noho ny mpampiasa Ubuntu satria ny fametrahana sy ny fampiasana ny distro dia mitaky fahalalana fanampiny.
VLC no mpilalao haino aman-jery tiako. Ampiasaiko amin'ny Windows sy GNU / Linux izany, ary io no ampiasaiko hijerena izay video amin'ny endrika tokony hosokafako. Ary koa, manana ny lisitry ny playlist izay tena mendrika.
vlc no hany mpilalao horonantsary mendrika an'ny osx, ho an'ny audio dia tsy tiako loatra izany fa.
linuxmanr4 dia hoy izy:
Raha manam-bola hividianana Mac ianao dia tsy mahita olana lehibe aho ... andao hojerentsika ny fandehan'izany miaraka amin'ny famerana, satria Apple no làlan'izy ireo ... na tsy misy!
Valio i linuxmanr4
Be dia be ny miresaka momba ny rindrambaiko maimaimpoana ary avy eo manolotra zavatra tsy ara-dalàna tanteraka, ary noho izany tsy manaraka fomba. Tsy misy zavatra mifanohitra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana mihoatra ny etetika.
[Tehaka ho an'ny Cocolio]
Ary aiza no ahitanao fa nanoro hevitra anao aho mba hametraka hackintosh iray? satria tsy hitako.
Ny hevitr'i nano no tiako horesahina, fa angamba tsy azoko ilay izy.
ahh ok, jereo, nano vao nilaza fa mampiasa hackintosh XD aho
Noheveriko fa tsy maintsy atao izany, xD satria ny hevitra teo aloha dia niresaka momba ny vidin'ny fitaovana. miala tsiny
Hmm eny, momba azy no noresahiko ... manana olona adala kely fotsiny izahay izay te-hanome hevitra fotsiny noho ny fanaovana azy ... Tsy miresaka amin'ny antsipiriany aho, na dia i Itachi aza, manandrana mandanjalanja izay vakinao bebe kokoa, ary izaho mieritreritra aho fa misy zavatra tsy haiko mazava.
Hackintosh toy izany dia tsy tokony ho ara-dalàna raha mbola mividy ny rafitra fiasa ianao ary mametraka azy amin'ny solosaina PC, tsy azoko antoka izany fa tsy mino aho fa misy fahazoan-dàlana mandrara anao hametraka OsX amin'ny zavatra hafa ankoatry ny Mac.
Eny @nano, na dia ampahany amin'ny fahazoan-dàlana paoma aza izany, dia azo ampiharina amin'ny firenena sasany io fahazoan-dàlana io ary any amin'ny hafa tsy amin'ny fandikana lalàna ambony.
Tsiahivina fa ny EULA, dia miorina amin'ny lalàn'i Etazonia ary amin'ny ankabeazany, dia tsy ara-dalàna any Eropa (afa-tsy i Alemana….)
Eto ianao dia afaka mividy hackintosh ara-dalàna! ary efa 5 taona mahery no nivarotan'izy ireo tany Eropa 🙂
Any Etazonia sy firenena vitsivitsy ihany no tsy ara-dalàna.
Ary matoa isika, ny licence paoma dia tsy etika marina ...
Nampiasa OSX nandritra ny herinandro vitsivitsy aho noho ny antony miasa (fiofanana teknika) dia navoakan'ny olona haingana aho noho ny "fanontaniana" hahaha.
Ny estetika dia ny hatsarany indrindra ho ahy, ary ny fampiasa sasany amin'ny fitantanana ny birao (effets, ny hitsin-dàlana sns) fa ny fitaovana entiny dia voafetra ho an'ny vidiny / tombony entiny satria matanjaka ao aminy ihany ny rafitra.
Tokony hametraka RAM bebe kokoa aho hananganana virtoaly na asa mavesatra kokoa, ity amin'ny Macbook, iMac ary macmini, hahafahako mampiasa azy ara-dalàna. Voafetra, voafehy be, miaraka amin'ny foara ny fitaovany. Nianjera aho ary nilalao mandra-pamerenan'ny rafitra iray manontolo (fampiasa hananganana indray ny sarin'ny rafitra, izay ao anatin'ny iray amin'ireo fizarazarany).
Ny famaranana dia tsy mandresy lahatra ahy, na amin'ny rafitra na amin'ny filozofia, amin'ny alàlan'ny naoty eken'ny hatsarana. Ankizivavy plastika na aiza na aiza ahitanao azy. Fa misy zavatra ho an'ny rehetra.
momba ny fitaovana tsy ilaina hitakiana, marina izany, afaka taona maro vao hahita ahy mividy zavatra XD izy ireo
Striders dia hoy izy:
Avelako ho anao ny sombin'ilay tafatafa tamin'ny 1998 niaraka tamin'ny Mpanorina ny KDE
Mikasika ny Gnome: satria izay rehetra lazain'ny mpamolavola KDE momba ny Gnome ampahibemaso dia adika ho filokana, aleoko mangina. Na izany na tsy izany, tsy misy na inona na inona toy ny ady Gnome / KDE, farafaharatsiny tsy eo amin'ireo mpamorona. Matetika ny mpamorona dia manaja ny olona rehetra, izay mandoto ny tànany tokoa ary manoratra kaody loharano. Na izany na tsy izany, ny ady lelafo dia tena nampalahelo ahy tokoa, nanimba ny finoako fa misy na toa zavatra iray toa ny linux-community. Tsy ny KDE ihany fa ny zavatra rehetra. Lazao, ohatra, fa nanoratra mpanoratra hafatra vaovao ianao. Handrehitra anao ny olona fa tsy nanatsara ny emacs ianao. Ny hafa kosa hanomboka hiady hevitra fa manana fomba mitovy amin'izany i vi ary eto isika. Efa namaky famoahana avy amina emacs na mpamorona vim iray ve ianao tamin'ny famakiana ilay iray hafa? Na ambarao fa nanoratra laharana LaTeX ianao. Handrehitra anao ny olona fa ny fomba fanoratany TeX ankehitriny dia tsara kokoa, matanjaka kokoa, toa unix, sns. Fa maninona Mpampiasa linux maro any no toa mino fa ny mpanoratra rindrambaiko maimaimpoana dia te-hanery azy ireo hampiasa manokana ireo zavatra vaovao. Hadalana izany. Raha tianao ny rindrambaiko sasany dia ampiasao izany raha tsy izany dia ampiasao zavatra hafa. Fa maninona no sarotra be ny mahatakatra izany amin'ireo mpankafy linux maro? Tsy manan-kevitra aho. Na izany na tsy izany, nihatsara kely izy io, ka misy fanantenana. Amin'izao fotoana izao ny olona dia afaka mametraka fanontaniana ara-teknika momba ny KDE ao amin'ny vondron-gazety linux ankapobeny ary mahazo, valiny ara-teknika fa tsy mirehitra. Izaho manokana dia tsy mamaky tarehim-baovao linux intsony. Ny fivoarana tena izy na ny fanohanan'ny mpampiasa farany dia mitranga amin'ny lisitra fandefasa-mailaka izay manome mari-pahaizana famantarana / tabataba tsara lavitra.
Mamaly an'i Strider
Nanomboka tamin'ny 98 ka hatramin'ity daty ity dia niova be ny sehatra, ary ireo mpamorona ho an'ny KDE, na farafaharatsiny ho an'i Qt, dia nanjary radika be hatramin'ny roa taona lasa izay. Marina fa niova ny toe-javatra ary mety mitombina ny FAMPANDROSOANA an'ny mpampivelatra gtk, saingy androany, na dia tsy ady aza izany dia maro amin'ireo mpandraharaha gtk ivelany no manohitra mafy ny gtk.
Linux tsy ampy be nefa mbola ampiasaiko ihany
Linux dia ho an'ny mpizara ka izany no mahatonga ny tsy fahombiazan'ny Desktop
Linux no fototry ny rafitra, ary misy fizarana miompana amin'ny lohamilina ary koa amin'ny birao (ilay Ubuntu ankahalaina indrindra). Saika ny zava-bita rehetra natao tao amin'ny Linux dia noho ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampiasa vondrom-piarahamonina an'arivony, ary afaka mandray anjara ny tsirairay, ka tsy hitaraina, ny tokony hataonao dia ny manatsara azy (ary tsy mila programmer ianao, afaka miara-miasa amin'ny fomba an'arivony ianao, ohatra, amin'ny famelana fanomezana na famelana ireo "tolo-kevitra" ireo ao amin'ny tranonkalan'ny tetikasa). Eny, azo hatsaraina ny Linux, fa ny vahaolana dia tsy ny fametrahana azy ireo maintso na milaza fa ny zava-drehetra avy amin'ny Windows sy Mac dia tsara kokoa (izay raisina ho azy, raha tsy izany dia tsy ho voaloa izy ireo ary lafo lavitra kokoa).
Ary tamin'ity lahatsoratra ity ihany dia tsy nataoko maintso izy ireo, raha te hitsoaka ny Linux aho, dia ho naka zavatra hafa tsy tiako horesahina satria tsy misy ifandraisany.
OS X no banga ratsy indrindra hitako lavitra, tsy tiako akory ny fiantsoana estetika azy, "slutty" be izy io, tsy amin'ny toe-tsaina manevateva, fa izay no marina, nanana MBP aho ary efa dimy andro ratsy indrindra tamin'ny fiainako, avy eo nametraka OS X tao amin'ny Lappie faharoa izay ananako teo (raha hackintosh) izay manana toetra mitovy amin'ny MBP tamin'ny androny, hoy aho saika satria tena tsara lavitra hahaha, ary tsara fa tena ratsy ilay rafitra miasa ka nesoriko izy ary ankehitriny dia miaraka amin'ny Windows 8 izy ary milamina na eo aza ny fahafantaran'ny bullshit ny fahatsiarovana horonantsary 256 fa tsy 512, fa hay, lappie faharoa io.
Fa ny lazainao momba ny mpilalao satria ny iTunes no ratsy indrindra satria tadiaviko tao, dia misaotra bebe kokoa an'io programa io ary ny hafa dia ny halako an'i Apple fa heveriko fa apetraka hampiasa ny iPhones, na izany na tsy izany Winamp arivo. fotoana tsara kokoa, maivana kokoa ary ilaina kokoa noho io zavatra io, amin'ny Linux tadidiko ny fampiasako ny Listen betsaka, tena tsara na dia teo aza ny zava-misy fa toy ny Linux rehetra dia nisy beta ary nianjera ratsy tarehy, antenaina fa voavahan'izy ireo izany olana izany.
Fa izany no fialantsininao amin'ireo mpamily sy audio satria tsy mino an'izany mihitsy aho, antenaiko fa hamelabelatra bebe kokoa momba an'io fizarana io ianao, satria tsy olana velively ny firaketana feo hatramin'ny Windows 3.1 hahahaha ary tsy mila milaza intsony hoe manao tutorial sns.
Raha ny marina dia tsy hitako ny antony hametrahana an'io OS io, na ny filalaovana azy, tsy bebe kokoa na noho izany tsara, fa tsara ny tsirairay amin'ny tantarany, marina? Farafaharatsiny nametraka ny Windows teo amin'ny masiniko rehetra aho, manana tablette misy Android, telefaona 2 ary telefaona finday hafa misy Android aho, ary afaka mividy iray amin'ireo solosaina finday kely misy Android ireo aho satria mahasarika ny saiko izany, ka tsy izaho fanboy, manao Windows im-arivo ao amin'ny birao sy Linux amin'ny serivera aho, na dia marary an-doha aza izy ireo hahahaha, arahaba.
tena tsara, efa fantatray fa tianao ny varavarankely, arahaba soa, tsy hampiasa windows 8 aho na homena (ary mbola manana ny fahazoan-dàlana am-boalohany aho noho ny programa microsoft developer). Raha faly ianao dia salama tsara.
Ary satria tsy maniry ny hametraka polemika aho satria efa fantatro ianao, dia ilaozako ianao.
Tsy misy na inona na inona eto amin'izao tontolo izao atahorana kokoa noho ny tsy fahalalana marina sy ny hadalana amin'ny fieritreretana.
Ahhh marina fa ianao no iray amin'ireo mpangataka solosaina lehibe indrindra any, hanala tsiny ahy ianao hahahahaha, tsy hanome hevitra momba ny lahatsoratranao indray aho, noho io antony io ihany, fantatro ianao. (misaotra nampatsiahy ahy)
+1 fandriam-pahalemana sy repoblika.
amin'ny fiheverana fa ny vondrom-piarahamonina hackintosh dia vondrom-piarahamonina miasa eo ambanin'ny fanahin'ny openource ary ny tonymac dia mandray ny asan'ny hafa hametraka azy ireo amin'ny programa kely misy azy ireo nefa tsy mamoaka ny kaody loharano, ary mahazo vola ihany koa miaraka amin'ireo fitaovana hita ao, ity rohy ity Tsy tokony hiseho eto akory aho.
Pffta tena tsy haiko ny fomba ahafahanao miatrika compadre anao …….
Tsy haiko akory ny fomba anaovany an'izany fa mbola mimenomenona izy.
Elio Heveriko fa tsy misy mahalala, fa hey, olona kely mahatsiaro tena izy, mpankafy Apple mahazatra.
Raha ny fahitanao azy dia azo antoka fa tsy fantatrao ny fomba handaminana zavatra amin'ny alsa, pulseaudio, ny famahana vahaolana isaky ny lalao azonao vidiana mora foana amin'ny alàlan'ny Steam for Ubuntu Mint ary jereo raha miasa tsara amin'ny OpenGL ny karatra video na ny mpamiliny. Ny zava-drehetra dia voavaha amin'ny fetran'ny enta-mavesatra apetrany, fa ao amin'ny GNU / Linux, BSD ary ny derivatives, io lafiny io dia tokony halamina tsara, ary betsaka kokoa raha avy amin'ny NVIDIA sy ATI / AMD izay tsy sahy manome fanohanana tsara kokoa ho an'ny GNU / Linux).
Inona koa, Debian Stable amiko dia mora kokoa ny miatrika fallback GNOME 3.4 noho ny OSX miaraka amin'ny interface Aqua.
Ny marina dia ho ahy ny interface tsara sy tsara indrindra nampiasako dia ny Gnome, namboarina miaraka amin'ny hoditra compiz sy emeraoda hatsaran-tarehy, ny lalao miaraka amin'ny WINE intsony, tsia? Na dia mampifaly ahy bebe kokoa aza ny minesweeper sy ny lalao mitovy amin'izany.
Aleoko Steam alohan'ny mankaleo ahy amin'ny minesweepers GNU sy Tetris.
Nanandrana ny OpenBSD aho ary ny marina dia izao tontolo izao mifanindran-dàlana eo amin'ny GNU / Linux sy UNIX. Andao hojerentsika raha iray amin'ireo andro ireo aho dia misintona ny Solaris amin'ny alàlan'ny tranokala Oracle ary manome azy tsiro.
Raha ny momba an'i Windows, azoko lazaina fa ampiasain'ny ankamaroan'ny mpampiasa PC hatramin'ny nametrahan'ny Microsoft ireo mpanamboatra hampiditra azy ireo na "hamoy ny volany" izy ireo (Paikady noforonin'i John D. Rockefeller nangataka M $), saingy kely kokoa ratsy Cannonical dia manova izany paradigma amin'ny Ubuntu (na dia tsy ny tsara indrindra amin'ny disto rehetra aza, io no malaza indrindra amin'ny rehetra).
Manaiky tanteraka aho fa mampiasa OS X satria fanapahan-kevitrao izany.
Tsy afaka maneho hevitra momba ny teboka 1 aho satria tsy manoratra tarehintsoratra tatsinanana fa tsy maintsy misy ny vahaolana.
Ny point 2 dia tsy misy fiatraikany amiko, ny mpilalao ihany no ampiasaiko mba hihainoana ny mozika ananako ao anaty kapila mafy, tsotra be aho. Fotoana vitsy lasa izay dia nanandrana ilay antsoina hoe Musique aho izay tena tsara na dia tsy nanana ny habetsaky ny safidy nolazainao aza
Toa ahy fa ny interface Libreoffice dia mila fanovana interface, fa ny manatsara ny zava-bita no zava-dehibe kokoa (izay hitako fa nihatsara be tato ho ato) sy ny mifanentana.
Raha ny momba an'i Wayland sy ny feo ao amin'ny Linux dia manaiky mafy aho; Aleo aho nampiasa Pulseaudio ary handeha ho any ALSA.
aaahh efa novakiako daholo ny hevitra rehetra ary fantatro fa tsy manana coppers ny pandev hehe, sangisangy izy antitra, heveriko fa raisinao ho toy ny distro iray hafa ny osX, ary raha manampy anao amin'izay ilainao amin'izao fotoana izao dia tsy ratsy ny fanapahan-kevitrao. Ary maninona aho no manoratra amin'ny solo-sainako, ok!
ehehe marina XD
uff amin'ny iTunes-nao dia hitako fa maharikoriko na amin'ny resaka fihinanana izany na noho ny fiasa be loatra. raha ny marina dia mbola tsy nahita mpilalao mozika tokana tao amin'ny linux aho izay ahatsiarovako 100% (miala tsiny fa zazalahy foobar aho). Ary jereo, tsy maintsy nanandrana roapolo mahery aho.
Na izany na tsy izany, na dia tsara tarehy kokoa na kely aza ny interface dia tsy maninona izany satria nahenaiko foana io rehefa miasa aho, mijery, milalao na inona na inona.
deadbeef dia tsara, ary manana ny mampitovy azy amin'ny foobar (SuperEQ) fa tsy manana mpikaroka rakitra toa ny eat. tena mahay mandehandeha dia tena tsara amin'ny ankapobeny fa ny equitiser dia toa tsy dia eo amiko, amarok mihinana ondrilahy 500mb fotsiny hanombohana sns sns sns.
Raha ny momba ny lalao dia azoko mazava tsara: ny fizarazaran'ireo varavarankely amin'izay lalaoviko amin'izany fotoana izany sy ny fampiharana sasany izay tsy ahitako fanoloana mendrika amin'ny debian sy ny fihazakazako 🙂
Amarok azo iadian-kevitra ny iTunes avy amin'ny GNU / Linux (avy amin'ny KDE ho marimarina kokoa). Miaraka amin'i Audacious, tsy manana olana aho, satria manana ny fototry ny audio player, saingy tsy ampitahaina amin'ny halehiben'ny VLC Media Player io.
Amin'ny fanjifana, lany amin'ny pc-ko izany
Saika tsy misy.
Hahahahaha be loatra? ary tsy misy antony? weinamp ao amin'ny solosaiko PC dia 8 megabytes, ary amin'ny solosaina findainy dia mahatratra 58 megabytes farafaharatsiny satria feno hira maro izy hahahahahahaha, hurray an'ny iTunes !!!!
Tsy iTunes no noresahiny fa cpu, fahatsiarovana no resahina, toa ny handany 500 megabytes izy.
ary winamp no mpilalao ratsy tarehy indrindra hitako, gidro haino aman-jery tsara kokoa ho an'ny windows.
JAjajajaja fa azonao atao ny manova hoditra, apetaho ny DSPs, ampio equalizer, mpijery ary sns sns ary 16 megabytes ihany ny lanjan'ny fampidinana anao raha tokony iTunes 90 megabytes? Efa hadinoko fa mandeha any sa tsy izany? Ary ny fametrahana ireo zavatra rehetra ireo (DSP, hoditra, sns) tsy lazaina intsony, ny iTunes sy ny interface Apple iray manontolo dia tena maharikoriko, maloto loatra ary koa zaza.
Winamp dia mahatsiravina, ny estetika dia "archaic" (raha azonao lazaina izany) ary rehefa nampiasaiko taloha ela be aho dia nanome lesoka be dia be toy ny hang, tsy misy feo na zavatra toa izany, ny hany zavatra fantatro dia fa amin'ny solosaina dia miasa tsara ny taloha (tsy manisa ny lesoka nomen'ny programa indraindray) fa efa an-taonany maro no tsy nahita solosaina manana RAM 2GB latsaka.
Farafaharatsiny miaraka amin'i Winamp dia azonao atao ny mampifanaraka ny hiranao amin'ireo fitaovana Android amin'ny fomba mety indrindra, ankoatry ny zava-misy na dia maharikoriko ho an'ny maro aza ny interface misy azy antsoina hoe Bento ankehitriny (raha ny fahitako azy dia endrika fanatsarana tarehy io amin'ny interface «Klasika» sy «Maoderina»), azonao atao ny mijery ny tranokala ofisialy mba hahafahanao misafidy hoditra izay maka tahaka ny iTunes aza (nanandrana aho, ary afaka milaza aho fa iTunes ho an'ny Windows dia mandany loharano betsaka noho ny lanin'ny Winamp miaraka amin'ny "hoditra maoderina").
Raha ny amin'ny andiany 3 dia maro no nijanona tsy nampiasa Winamp noho ny tsy fitovizany maro, noho izany dia nanapa-kevitra ny hanavotra ireo fiasa amin'ny kinova 1 sy 2 izy ireo ary atambatra amin'ny kinova 3, ary avy eo hamoaka ny kinova 5 (ny kinova ankehitriny dia 5.6 X ary izany dia milamina kokoa noho ny teo aloha ary najanon'izy ireo ny famotsoran-keloka izay efa mahasosotra ampy).
Ny kinova izay hitomaniany dia ilay kinova navoakan'izy ireo ho an'ny OSX, izay tena miankina tanteraka amin'ny iTunes mba hahafahana mampifanaraka ny playlists sy ny hiranao amin'ny Android, ary tsy manome anao safidy hankafizanao an'i Shoutcast ho anao counterpart ho an'ny Windows.
Io ilay kinova ho an'ny osx ... sangisangy, navoakan'izy ireo satria nanam-potoana malalaka izy ireo, fa ny mpilalao rehetra kosa tsara noho izany.
Momba ny fampifanarahana ny android .., satria tsy hoe tsy miraharaha ny marina loatra aho, tsy mino aho fa hividy iray.
Ny tena marina dia kely dia kely ny fotoana nananako nampiasa azy io tamin'ny hackintosh-ko, raha ny tena izy dia saika tsy natodika akory io solosaina finday io satria tsy misy ilàna azy io OS io ihany, fa raha ny tena izy dia toa ny tombotsoako ihany no eo amin'ny rafitra fisie. ny rafitra iray ihany (ho an'ny fikarohana hira), ary raha ny marina dia ilay tombony azon'i * nix mihoatra ny Windows, NTFS, na manao ahoana na manao ahoana ny toetr'andro, dia taraiky ao ambadiky ny hafa, fa avy eo… iTunes tsy misy mihitsy araka ny itiavako azy, indrindra ny kinova farany, manahirana sy manahirana kokoa, ao amin'ny Winamp dia notaritaritako fotsiny na notsindrio ny shift + enter mba ampidirina ao anaty lisitry ny playlist ireo hira, ilay programa mitovy io no manisy marika ho ahy ireo hira raha tsy manana anarana izy ireo zavatra takian'i iTunes fa voahodidin'ny fandaharana ireo hira ary snsetera lava io…. tsara Ho ahy dia banga.
Na izany na tsy izany, ho an'ny varavarankely dia amporisihiko mafy ny foobar, manana ny feo tsara indrindra izy io (voaporofon'ny hydrogenaudio ..), ary ny hoditra somary tsara tarehy any, miampy ny rindrambaiko maimaimpoana heveriko fa maimaim-poana.
@Elio tsy haiko hoe naninona ianao no nanoro ahy hoditra mitovy amin'ny iTunes, mankahala zavatra amin'ny paoma aho, ary tsy miraharaha ny fampifanarahana, iray amin'ireo mampiasa mpilalao fotsiny aho hilalao (mendrika ny redundancy) , ny Android Winamp hitako fa mahatsiravina koa izy io, aleoko ilay tonga tsy misy hatak'andro.
Ny soso-kevitra momba ny hoditra fotsiny no nomeko ho an'ny Winamp. Na izany na tsy izany, Winamp no mpilalao ampiasaiko amin'ny audiostreaming izay atolotry SHOUTCast ary hanao ny playlistsiko manokana ary hampifanaraka azy ireo amin'ny findaiko Android miaraka amina albums. Na izany na tsy izany, Winamp dia nihatsara be, saingy tsy maintsy lazaiko fa ao amin'ny OSX dia tokony hanana asa mitovy amin'ny mifanitsy aminy amin'ny Windows izy.
Pablo N. dia hoy izy:
Andao hojerentsika, andao hizaha ampahany
Ny zavatra voalohany dia ny hoe raha te hampiasa Windows ianao, na Mac, na ny rafitra fiasa izay tadiavinao, dia ny fanapahan-kevitrao io, manan-kery sy hajaina. Na izany aza, tsy mino ianao fa hoy ianao, taorian'ny nanoratanao lahatsoratra Linux tamin'ny tranokala iray natokana ho an'ireo mpampiasa Linux, "Hey, Linux is more for this and this reason" avy amin'ny rafitra miasa hafa. Midira ao amin'ny vahaolana fa tsy an'ny olana.
Ny faharoa dia mifandraika amin'ny atin'ny lahatsoratrao. Marina fa tsy manana fomba looooong i Linux mba horaisina ho filamatra. Na izany aza, nisy ny fandrosoana. Ary betsaka. Nampiasa Ubuntu nandritra ny 7 taona aho, ary maro ny fiovana. Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe afaka manana Steam, miaraka amin'ireo lalao teratany ho an'ny Linux, rehefa nanomboka nampiasa azy aho. Tany am-piandohana dia nanana olana tamin'ny zava-drehetra aho, nianjera ny tontolo iainana, tsy afaka nilalao mangina aho ary fanamby ny mifandray amin'ny internet. Raha manao fampitahana ianao dia TSY MISY.
Tsy milaza aho hoe manajamba ny masonao ianao ary tsy miraharaha ireo olana atolotra anao, fa mitombina ary tena misy izy ireo. Nefa diniho ihany koa ny halaviranao sy ny ahalalanao ny fanovana.
Ary farany, toa avo roa heny ny hafatrao. Hoy ianao hoe 'ratsy ny linux, misy an'ireny zavatra ratsy ireny. Nifindra tamin'ny OSX aho, mandeha tsara kokoa FA LINUX TSARA INDRINDRA ». Raha milaza izany ianao, dia mitanisa hoe "GNU / Linux dia ambony lavitra", naninona ianao no tsy nijanona?
Valiny tamin'i Pablo N.
Ny zavatra voalohany dia mbola hitako fa mampihomehy fa tsy mandinika tsara izay soratany ny olona ary mamela tanàna 3 na 4 amin'izay tiana holazaina. Ampahany tsirairay:
1- Tsy ilaina ny mamantatra izay efa tsara, satria efa tsara izany, ny zava-dehibe dia ny mahita izay tsy mety ary miaiky fa tsy maintsy ovaina izy ireo satria zava-dehibe amin'ny fampiasana izany. Raha te-hisintona mafy ny Linux aho dia niresaka zavatra hafa izay tsy tiako nokasihina akory, satria tsy dia nanorina mihitsy izy ireo-
2- Ampy ny olona manaraka ny asan'izy ireo.
3- Tsia, tsy nilaza aho hoe diso ny Linux, nolazaiko fa diso ireo zavatra ao amin'ny Linux ireo :). Tsy mitovy ny milaza fa ratsy ny Espana noho ny milaza fa ratsy ny tanàna any Espana.
4- Heveriko fa nilaza mazava tsara aho fa milalao ops mainty adiresy, raikipohy 1 2012 ary ny Counter dia mitifitra manerantany ary izany no mahatonga ahy ho mac osx ...
5- Tena reraky ny olona mamaky lahatsoratra mitsikera, misy poizina amin'ny nifiny.
Mpanaraka ny finoana? Ny conformism dia manantena ny hoderaina amin'ny fampiasana an'io rafitra io, ny conformism izay, tsy afaka miaraka amin'ireo mpamily feo aho ary te-hilalao kilalao kely ihany koa ...... ary izany no mahatonga ahy hifindra amin'ny OS X satria halako Windows. , raha ny marina dia tokony ho ny hafatrao: Ahoana ny fametrahana lalao amin'ny Linux miaraka amin'i Steam, PlayOnLinux, Divay na zavatra toa an'i Crossover (izay aloa ary nampiasaiko), ary lahatsoratra iray hafa izay anehoanao ireo olana atrehanao amin'ireo mpamily feo. , izay ahazoanao tamberina (feedback) betsaka avy amin'ireo mpampiasa Linux.
Tsy nilaza ve ianao fa tsy hanoratra bebe kokoa? 🙂
HAhaha farafaharatsiny tsy ao amin'ny lahatsoranao, fa hay tsy afaka mitsahatra maniry ny kitay ianao, ary zanaka very loatra ianao, ny fihetsikao dia ny zaza latsaky ny 15 taona ary capricious loatra, raha te-hanadino izany dia tsy hita izany. manohitra ny tenanao ianao, miteny ratsy ny olona iray izay "mampiasa kaody maimaimpoana" nefa kosa mampiasa rafitra fandidiana izay tsy vitan'ny hoe mampiasa rindrambaiko maimaimpoana ianao fa ankoatry ny famoahana ny fehezan-kevitry ny rindrambaiko iray dia te hampifanaraka zavatra hafa, manao izany aho tsy tadidio fa ny ampahan'ny HTML 5 dia nilaza fa (toy ny mahazatra) ny "fananany" ary koa, tsy misy intsony io "orinasa" io.
Mandrosoa, atsaharo ny fanaovana toy izany, raha 92 taona nahaterahanao dia tsy diso aho, sa tsy izany? matotra kely ary fantaro ireo zavatra lazainao sy ataonao, torohevitra mahasoa izy io.
eny eny ok, :), aleo mandeha mitomany amin'ny reninao fa hihaino anao izy :), avy eo raha tonga ny fotoana izay raràn'ny trolling tsy tapaka ianao dia aza mimenomenona.
Hahahaha ary tsara farafaharatsiny zavatra iray mazava fa manan-dreny aho hahahahaha (hoy ianao… shit fa efa fantatro izay fanabeazana anananao, ilay mahantra indrindra)
Ao amin'ny lingo amin'ny Internet, ny troll na trol1 dia mamaritra olona iray mandefa hafatra mandranitra, tsy misy ifandraisany na tsy misy lohahevitra ao anaty vondrom-piarahamonina an-tserasera, toy ny forum fifanakalozan-kevitra, efitrano fifanakalozan-dresaka, na bilaogy, miaraka amin'ny fikasana voalohany handrisika na hanelingelina valinteny mampihetsi-po amin'ny mpampiasa sy mpamaky, miaraka amina tanjona samihafa sy mahafinaritra2 na, amin'ny fomba hafa, manova ny resaka mahazatra amin'ny lohahevitra ifanakalozana, ka mahatonga ireo mpampiasa ireo ho tezitra sy hifanehatra.3 4 Ilay troll dia afaka mamorona hafatra misy karazana atiny samihafa toy izany satria ny tsy fahalalam-pomba, ny fanafintohinana, dia sarotra hita, miaraka amin'ny fikasana hanakorontana sy hiteraka fahatsapana mifangaro amin'ny hafa.
= troll ianao
Amin'ny Internet jargon ... hahaha, nandany vola be ve ianao mba hamoahana izany amin'ny wikipedia? sa geek? hahahahaha, omeo zazalahy io, inona no fotoana nanovako ny resaka? Niditra fotsiny aho hanitsy anao, fa amin'ny maha zaza capricious tsara anao dia tsy te hianatra ianao, ianao no troll amin'ity bilaogy ity satria bilaogy LINUX fa tsy izy: Satria nifindra tamin'ny OS X aho dia tazomy ho anao izany tsy misy miraharaha, mianatra avy amin'ny tsikera mahasoa, dia hanompo anao amin'ny fiainana izany, ary ajanony ny filalaovana fetsy fa tsy ianao.
Manana ny chipset ampiasain'i @ pandev92 aho, nanomboka nilalao tamin'ny alsa satria ny feo novonoina rehefa nosokafako ny Ardor niaraka tamin'ny ALSA ary tamin'ny famerenana dia voavaha daholo ny zava-drehetra ary naneno indray izany. Tsy azonao atao ve ny mahazo fanampiana amin'ny fanoratana fotsiny ny "alsa" ao anaty console ary mahita ireo safidy omeny anao?
Ilay manaraka azy, alao izy.
Diego. dia hoy izy:
Tiako ny fahalalahana atolotry ny GNU / Linux 🙂
Valiny tamin'i Diego.
iTunes dia mpilalao HORRIBLE.
eny, izy ireo dia fomba fahitana zavatra, rehefa nampiasaiko tamin'ny varavarankely aho dia nino izany ihany, ankehitriny rehefa ampiasako amin'ny osx, satria niova ny hevitro.
Tsy mahita fahasamihafana misy eo amin'ny Windows sy OS X ny marina.
Amin'ny fampisehoana dia manana fahasamihafana goavana izy io, ary zavatra iray izay taterina amin'ny forum vitsivitsy ny marina :).
Hahahaha ary fampisehoana inona no azon'ny mpilalao mozika atolotra eo? amin'ny fotoana ilana azy? amin'ny fanjifana fitadidianao? haingana be ny fikarohana ny hira tianao? hahahahaha, tsara izao amin'ny fikarohana mozika ary miombon-kevitra aminao aho, mikaroha haingana, satria ankoatr'izay dia mahavita ny database-ny izay lehibe, ary amin'ireo teboka hafa… efa misy mpilalao tsara kokoa manao an'io, araka ny efa nolazaiko anao momba ny Linux hafahafa Mihainoa, haingana, maivana, mahasoa…. na izany na tsy izany.
fampisehoana inona? fotoana hanombohana, fotoana hifindra eo anelanelan'ny fonony, handefasana hira ary maro hafa, fa inona no ho fantatrao :).
iTunes ho an'ny Windows dia misy fanjifana fahatsiarovana adala izay zara raha ampiasaiko hanavaozana ireo iOS izay ao amin'ny iPod Touch sy ireo iPhones. Amin'ny maha-mpilalao mozika azy ao amin'ny rafitra Redmond dia mitomany izy, fa ho an'ny Mac kosa dia "lehibe" tsotra izy io satria mampiasa ny rafitra Cocoa ary noho izany ny fahasamihafana lalina misy eo amin'ny kinova Windows sy ny kinova Mac.
Eo anelanelan'ny QuickTime sy VLC dia aleoko ny VLC (mpilalao haino aman-jery tena izy) noho ny fahafahany sy ny fahaizany milalao ireo endrika haino aman-jery samihafa izay saika amin'ny sehatra rehetra. Tsy dia mampiasa QuickTime aho hiara-miasa amin'ny Adobe Premiere sy After Effects.
Ny tena maha samy hafa ny OSX sy ny Windows NT 5.X / 6.X dia, amin'ny OSX, azonao atao ny mandika ny fampirimana programa REHETRA indray miaraka, miaraka amin'ny anaran'ny mpampiasa sy ny lakilen'ny vokatra. Etsy ankilany, amin'ny Windows, farafaharatsiny anananao ny fiarovana miankina amin'ny tranomboky fisoratana anarana izay ananany, satria na dia manao copypasta mediocre aza ianao dia tsy mandeha ny programa manana izany ary farafaharatsiny manana fiarovana ianao fa ny Suiteo Tsy ho adika tahaka izany .. endrika toa an'i Adobe, ohatra.
Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe hafa dia ny Microsoft dia malefaka kokoa amin'ny teny fandikana sy ny fizarana fizarana indray, izay mamporisika anao hiantehitra bebe kokoa amin'ny rafitra noho ny OSX, izay ny fehezan-teny sy taratasiny dia taratasy maty any amin'ny firenena maro, saingy tsy manana izy ireo ny fahamoran'ny fametrahana an'i Windows amin'ny PC noho ny GUI misy ra.
Raha ny fitoniana dia samy mitombina avokoa. Windows ihany no fantatra amin'ny ombelahin-tongony Achilles manomboka amin'ny lohany ka hatrany amin'ny OSX ary ao amin'ny OSX ihany no ampiasaina hamelana ny malware hiditra ao ary satria matetika dia misy tranga izay very ny angon-drakitra toa ny ao amin'ny Windows, dia tsy ilaina ny mametraka antimalware (amin'ny Linux Tsy ilaina ny mametraka antivirus toy ny an'ny ESET, satria ny valin'ny fanararaotana dia haingana kokoa noho ny amin'ny OSX sy Windows).
Jereo ny tena marina fa tsy nanao an'io fikafika ny OS X io velively aho, fa ilay famafana fa mamafa fotsiny ny «app» ianao (izay vitako MAriCa bebe kokoa hijerena programa iray) avy amin'ny lahatahiry fampiharana ary dia izay, satria rehefa nametraka Final Cut aho ary nohavaoziko satria nangataka lakile fanoratana manan-kery tamiko izy ary satria tsy nanana aho dia niroso tamin'ny "uninstall" hamerina ilay kinova teo aloha ary tsy nisy navela hamela ahy hametraka satria toa mbola ilay programa any, amin'ny teny vitsivitsy dia tena iray ho an'ny tadiavina avy any SO.
Raha ny momba ny antivirus, satria ilay Apple mitovy «nanolo-kevitra» tamin-katsaram-panahy, fotoana vitsy lasa izay, mba hametrahana AV hatramin'ny: «Tsy ny rafi-piasana rehetra no voaro amin'ny viriosy» hahahaha, ary tsy eo amin'ny tranonkalanao intsony izany sosokevitra izany noho izy ireo tsotra efa manana AV mitambatra antsoina hoe xProtect ary mazava ho azy ny avonavon'izy ireo dia tsy mitarika azy ireo hiaiky izany, sa tsy izany? Ny tena ratsy indrindra dia ny tsy fampiasan'izy ireo ny bits tsy fanatanterahana sy ny DEP ary noho izany dia tsy misy virus amin'ny PC toy izany, ary ankehitriny dia tsy dia misaotra ny UEFI nankahalain'ny Linuxeros loatra, saingy hoy izy ireo Raha ny tena izy, Apple dia im-arivo heny ratsy noho Microsoft ary tsy lazaina intsony ny mpankafy azy.
Mba hilazana ny marina, maro amin'ireo programa izay tsy vitan'ny Apple tamin'ny fomba nahaterahany, izay na ny VLC, izay namboarina tamin'ny QT, dia nihoatra lavitra azy ireo (noho izany antony iantsoako azy ireo hoe "app" tsotra fotsiny).
Na eo aza izany, fa tsy OSX, azoko atao ny manoro hevitra anao hametraka OpenBSD miaraka amin'ny KDE mba ho tsapanao fa ambony noho ny OSX ity rafitra ity raha ampitahaina amin'ny OSX.
Mhh @ eliotime3000, ny fampisehoana tsy misy ifandraisany amin'ny aqua, raha ny tena izy ny fampiharana toa ny mail, iwork, safari, aquamacs sns. tena tsara ny fahaizan'izy ireo, ary clementine kosa amin'ny crawl pc (ao amin'ny qt) izy io, ary manana i5 3570k somary mihidy be aho.
Mazava ho azy fa izay te hampiasa osx, mampiasa azy noho ny antony tsy mitovy amin'ny mpampiasa openbsd mety, ary ny ankamaroan'ny antony dia azo fintinina amin'ny vatomamy maso (tena subjectif), ary ny fampiasana rindranasa sasany toy ny birao ms, adobe photoshop, lojika pro, tarika garazy (XDDD ity no ampiasaiko) na fampiharana ara-barotra hafa.
Mazava fa tsy misy OS tonga lafatra, misy OS izay manarona ny mombamomba ny mpampiasa isan-karazany ary tsy misy amin'ireo mpampiasa ireo no ratsy kokoa noho ny hafa.
Nanao fanamarihana tamin'ity tranonkala ity aho ary toa voafafa ¬¬
Eny, mahafinaritra ny estetika ankapobeny an'ny OS X, mbola variana amin'ny minimalism an'ny solosaina Apple ihany aho na dia fantatro aza fa ny chestn'ny OS-ny. Tsy miova amin'ny GNU / LINUX aho na milalao an'izany fa misy ny consoles (sy ny steam) na dia tsy gamer loatra aza aho hiteny. Mampiasa Trisquel 6.0 aho izao ary 5.5 teo aloha nandritra ny herintaona mahery ary netbook studio manantena ny hametraka Elementary OS (beta 2) afaka andro vitsivitsy.
Mikasika ireo mpilalao dia tiako ny Music sy Banshee, na dia tsy nampiasako ho an'ny voalohany aza ity farany. Raha tsy izany dia tsy afaka nilaza taminao aho.
Tsy manam-bola lany amin'ny console aho fa hilalao in-2 na in-3 isan-kerinandro xD adiny iray na roa—
Raha ny marina, ny solosain-dry zareo no tsy dia tiako loatra, androany dia namoaka solosaina mitovy be dia be izy ireo ho an'ny 300/400 euro ambany sy tombony bebe kokoa.
lewatoto dia hoy izy:
Mikasika ny teboka faharoa, tsy haiko raha nampiasa mozika ianao (http://flavio.tordini.org/musique) tsia eny eny ny tianao holazaina dia toy izany, mozika amin'ny tranga Fedora dia misy ao amin'ny trano fitehirizana.
Mamaly an'i lewatoto
Ny mozika avy amin'ny gnome sy ny mozika avy amin'ny fanabeazana fototra dia hivoatra rehefa mandeha ny fotoana, ny zavatra iriko mba hisy koa ao amin'ny linux dia programa iray mitovy amin'ny codekit.
ny mozika fanabeazana fototra no tena tiako indrindra amin'ny gtk fa mbola tsy ampy zavatra maro 🙂
Nightingale dia manana SHOUTcast ho radio
Urizev dia hoy izy:
Te hizara ny zavatra niainako aho. Nampiasa Linux nandritra ny 12 taona mahery aho ary nandritra izay fotoana izay dia tsy nampiasa iray hafa aho afa-tsy ny Windows ho an'ny zavatra manokana. Nandia distros sy tontolon'ny birao be dia be aho. Izaho ary mino aho fa hiaraka amin'ny tontolo afaka mandritra ny taona maro. Na izany aza, tsy nanandrana Mac aho.
Vao tsy ela akory izay (2 taona lasa izay) nanolo-tena manokana amin'ny fivoaran'ny iOS ankoatry ny zavatra hafa aho. Hatrany am-piandohana dia nanandrana nampiasa emulator hitantanana MacOSX amin'ny Linux aho fa amin'ny toe-javatra maro dia tsy azo ampiasaina izany. Tamin'ny farany dia tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny mividy Mac Mini aho.
Ny marina dia tsy misy toerana ratsy toa an'i Windows io. Manana fitoniana bebe kokoa noho io izy io. Ho an'ny Linuxero dia ahazoana aina kokoa satria manana terminal misy bash ianao, ny maha UNIX ny filozofia momba ny rakitra sy ny rafitra dia mitovy.
Fa mbola malahelo an'i Linux aho. Ny teboka fahalalahana hahafantatra izay mitranga sy ny antony amin'ny lafiny rehetra dia lafo vidy amiko. Eny, Mac dia tena azo ampiasaina sy marin-toerana, misy vokany sy fluidity tena tsara izy io, voadio tsara, saingy tsy manana fanapahan-kevitra ny mpampiasa rehefa manapa-kevitra izay hatao amin'ny rafitr'izy ireo. Tena tsara tarehy ... mety ho. Mino aho fa ny hatsarana dia mitombina ary ireo izay tsy tia ny fisehoan'ny Mac dia tsy mahazo manova ny endriny.
Raha fintinina, mieritreritra aho fa rafitra fiasa tsara izany, ahafahanao miasa miaraka aminy tsara, fa tsy sarotra ny mampifanaraka azy raha avy amin'ny Linux ianao, sns ... saingy tsy misy zavatra ilaina amiko io: Freedom.
Mamaly an'i Urizev
Ity misy lesona momba ny fomba firaketana ny feo anatiny ao amin'ny masininao. 😉
Salu2 an'i Jesosy 8)
Mikasika ny libreoffice dia marina fa mila fanatsarana interface tsara izy io, saingy soa ihany fa efa miasa ao izy ireo.
Ny v. 4.1 dia efa ho avy amin'ny sidebar (na dia tsy navadika ho default aza aho):
Ho fanampin'izay, izy ireo koa dia hanova ny kinova manaraka na amin'ny manaraka ny kisary tsy misy fangarony ho an'ireo kanto kokoa:
Mikasika ny kajy dia toa misy fivoarana lehibe koa eo aminy:
Io no lazaiko imbetsaka, mihatsara isan'andro ny Linux, ary izay hitanao amin'ny volana ho avy dia mety tsy misy ifandraisany amin'izay misy ankehitriny. Betsaka ny olona mbola mieritreritra fa ny rafitra fiasa Linux dia toy ny tamin'ny 10 na 15 taona lasa izay.
ny sary masina dia mitovy amin'ny faenza namoaka teto (https://blog.desdelinux.net/faenza-iconos-para-libreoffice-4-0-0/), izay nampiasako satria tsara ny endrik'izy ireo ... Heveriko fa tsara ny làlan-kaleha arahin'ny LibreOffice, satria farafaharatsiny farafaharatsiny dia nampihoron-koditra (tsy lazaina intsony fa na dia mifanentana tsara amin'ny Office 2003 aza dia mbola tsy ampy ny an'ny 2007 no avo kokoa, ary ny endrika vaovao mifototra amin'ny XML dia efa ela no nivoaka), ary ampio hoatr'izany ny endriny ao amin'ny KDE
Raha mitovy ny endrik'izy ireo, dia toa lasa lamaody ankehitriny ny karazana endriny, ary ankoatr'izay ny mpanoratra ny faenza-libreoffice dia miara-miasa amin'ireo vaovao ireo ihany koa.
Ary ny olana dia tsy ny MS no manao ny zavatra rehetra azo atao satria ny biraony dia tsy mifanaraka amin'ny Openoffice na Libreoffice? Raha vantany vao mifanaraka amin'ny Office 2007 sy 2010 ny Libreoffice, andao hojerentsika ny faharetan'ny fanovana ny endrika.
Tsy misy na inona na inona, misokatra ny endrika oxml ..., ny olana dia efa nanary ny tenako efa ela aho, fantatro fa tena sarotra ny nampihatra azy ireo.
Mikasika ny fampiasana ny OSX86 izay ampiasain'i @ pandev92 dia tsy maintsy milaza izao manaraka izao aho:
Nametraka ny iAtkos 7 tao amin'ny Chips PC taloha aho ary nijaly. taranaka, izay nihazakazaka ny mpiorina OSX Leopard tsy misy olana. Saingy taorian'ny fametrahana ny rafitra dia naharitra zato taona vao nihazakazaka ny interface aqua. Raha afaka nanokatra ny interface Aqua an'ny installer OSX ianao tamin'ny horonan-tsary 1MB kely fotsiny, ary ambonin'izany dia avy amin'ny S32 ilay video, maninona no tsy nampidirina tampoka ilay interface rehefa napetraka izy io?
Nanadihady taty aoriana dia gaga aho fa 256 MB ny horonan-tsary ilaina amin'ny OSX interface tsara mba hihazakazahana ara-dalàna (avo roa heny noho ny interface Aero an'ny Windows Vista / 7), ary raha ampianay ny fiakarana tampoka amin'ny fanjifana loharano rehefa mampiasa ny flash player rehefa mijery horonantsary YouTube, ny GUI dia mety hianjera amin'ny fomba mahatsiravina kokoa noho ny Windows Aero mihazakazaka miaraka amin'ny Flash Player.
Noho izany dia nanapa-kevitra ny tsy hametraka OSX amin'ny PC aho noho ny fanjifana horonantsary mampihetsi-po miaraka amin'ny interface Aqua, ary hosedraiko amin'ny "tontolo voajanahary" (ampihimamba, ampihimamba hatraiza hatraiza) izany ary hialana amin'ny olana.
Ralehilahy, fa ny zavatra mahazatra ankehitriny dia ny manana sary 512 mb farafaharatsiny…, androany na dia gt610 (karatra poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop poop anao anao).
Angamba misy pc 500/600 euro, manana fampisehoana betsaka kokoa noho ny mac mini na ny imac misy sary intel ...
Eny, fantatro, fa tamin'izany fotoana izany dia mbola nampiasa ny jumper Windows Vista Ultimate PC ho an'ny INRI bebe kokoa aho, ary tena nampihoron-koditra izany ho ahy ary tamin'ny hafainganam-pandehan'ny Internet toy izany no nananako ... Mandra-pahazoako misintona ny fisintomana an'i Debian Squeeze aorian'ny Rehefa avy nandalo fitsapana aho dia velona niaraka tamin'ny hafainganam-pandehany mahaliana ilay kalandrie efa noroahina, ary avy eo dia miaraka amin'i Debian Wheezy sy Windows Vista miaraka amina HP Workstation iray aho izay tsy mijaly toy ny PC Chips-n'ny 1st . taranaka.
Andao hojerentsika ny hackintosh ahy (izany ve?) HP DV6000 dia C2D an'ny 2.1 4 ao amin'ny RAM ary 512 amin'ny horonantsary GT 8800, napetraka ihany koa teo amin'ny biraoko izay ina i7 an'ny 2.66 Ghz 12 ao amin'ny horonantsary RAM 1 Gb Nvidia 220 (eny eny efa fantatro) ary kapila mafy kapila mangirana, OS X niasa ho ahy reeebien, saingy azo antoka fa tsy misy azoko atao amin'ny OS X fa tsy amin'ny Windows ka nariako ilay tsy fahatomombanan'ny rafitra miasa, satria rehefa manao ny fanavaozana izay goavambe koa izy ireo satria mankany amin'ny devoly ary tsy maintsy apetrakao amin'ny filaharany ireo KEXT voaozona.
Ny mahagaga ahy Elio dia ny nahafahanao nametraka an'io rafitra io tamin'io masinina io hehehehehe, heveriko fa tsy maintsy nametraka modifitra zato kilao ianao tamin'ny fanombohana.
Ny iAtkos ampiasaiko dia efa nanohana an'io karazana mainboard io. Na izany na tsy izany, tsy nametraka hackintosh intsony mihitsy aho noho ny GUI mavesatra nananany (raha mila GUI tena tsara aho, dia hampiasa ny KDE amin'ny GNU / Linux ary Aero amin'ny Windows Vista / 7).
Iray volana lasa izay dia nanandrana MacBook aho ary tsapako fa raha hikatona farany ny programa amin'ny OSX dia mila manao CMD + X aho mba hanidiana ny programa ary tsy handany RAM bebe kokoa. Ho fanampin'izay, tsy nanam-bintana aho nanana ny touchpad bokotra iray miaraka amin'ny tsy fisian'ny fikitihana tsy mahitsy sy ny fitendry… Tena nahatsapa ho very bebe kokoa noho ny renin'i Marco aho rehefa tsy hitako ny lakilen'ny accents sy ny bracket ary ny obliques (ary izany tamin'ny Espaniôla).
Manantena aho fa hakaton'ny OSX tsara ho azy ireo programa ataonao amin'ny alàlan'ny tsindry fotsiny ny bokotra mena ary tsy hanao CMD + X hanakatona programa.
Leon Ponce dia hoy izy:
Manaiky tanteraka aho. Na dia tsy nanome ahy olana pulseaudio aza (fitaovana enti-miasa angamba) dia mbola tsy nahavita nandrakitra feo sy mikraoba anatiny aho, ary mahafaty izany fanaovana podcast izany.
Te-hilaza aho fa efa sendra olana vitsivitsy koa izay heveriko fa tokony horaisina:
- olana rehefa mamaky CD. Manana azy ireo foana aho. Ary tsy miresaka CD fananana aho (mampihomehy fa mifanaraka tsara amiko izy ireo), CD no noresahiko niaraka tamin'ny angon-drakitra nataoko (antontan-taratasy, sary, sarimihetsika…) Manana izany foana aho, ary na inona na inona fonosana apetrako, tsy nanjavona mihitsy izy ireo. Raha ny marina, izao dia eo amin'ny Windows aho mba hahafahako mampita zavatra any amin'ny DD ivelany, satria omaly dia tsy nahomby indray aho taorian'ny nametrahana fa tsy fantatro hoe firy ny fonosana.
-ny olana amin'ny wifi. Kilasika. Afa-tsy ny Ubuntu, ireo distros rehetra izay efa nanandramako dia nanome ahy olana amin'ity lafiny ity. Ary koa, olana miverimberina: ny mpamily Wi-Fi dia tsy misy amin'ny alàlan'ny default. Hatreto aloha, tsy misy na inona na inona mitranga. Mandeha amin'ny safidin'ny distro tsirairay aho hametrahana azy, ary eto dia manomboka ny olana. Fahadisoana mandritra ny fampidinana ny mpamily, olan'ny tsy fitadiavana fonosana ilaina hametrahana azy…. Kristy, tsy haiko ny fomba fanaovan'izy ireo izany, fa isaky ny mametraka distro aho hizaha toetra azy dia very adiny roa aho amin'ity lafiny ity. Toa tsy mahazatra ahy izany hoe ny Ubuntu dia namaha izany ary amin'ny distros hafa dia misy olana ny zava-drehetra, ary zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny olona maro.
-Amin'ny LibreOffice, ny olana dia tsy mifandray amin'ny interface fotsiny. Izany ve rehefa manandrana manao zavatra mandroso kokoa ianao fa tsy antontan-taratasy tsotra misy fampifanarahana voamarina dia manomboka tsy mahomby amin'ny fomba goavana. Niafara tamin'ny fahazoana manaova be fotsiny aho tamin'ny isan'ny nahantona ahy rehefa nanandrana nanome safidy format ho an'ny antontan-taratasy iray, na nanimba tanteraka ny endrik'ilay rakitra iray tamin'ny fanokafana azy fotsiny.
Valiny tamin'i León Ponce
Mhh momba ny wifi, nanana olana tamin'ny fanapahana fifandraisana aho tamin'ny wifi izay heverina fa mifanaraka amin'ny linux osx sy windows, ary tamin'ny farany dia nisafidy ny hametraka fiarovana wep .., ny wpa dia nanantona ny fifandraisana tsy tapaka ...
Momba ny CD, ny olana tokana nananako dia ireo CD mozika japoney tany am-boalohany, izay tsy asehon'ireo mpilalao linux ireo marika, rehefa nandeha ny fotoana dia hitako fa satria ny mpilalao toa iTunes na windows media player dia mampiasa gracedb (izay tompony, a database), raha ny hafa rehetra kosa dia mampiasa freedb, izay openource nefa tsy feno tahaka ilay voalohany.
Gracenote dia tsara ao Winamp, fa ao amin'ny Windows Media Player sy iTunes dia tsy afaka mamantatra rakikira ataon'ny mpanakanto tsy fantatra vita amin'ny kapila banga izy io. Raha navoakan'ny Gracenote ny kaody loharano niavian'izy ireo dia tsara izany, saingy tsy hitako izay mety hanaovan'izy ireo izany amin'ny tanjon'izy ireo (toa ny marika Japoney).
Fa ny tsy azoko dia hoe maninona no tsy navoakan'izy ireo fanontana vinina ho an'ny artista tsara indrindra ho an'ny tsena andrefana, satria misy fihenan'ny tanora any amin'ny tanin'ny Japoney ary nandeha nitety ny mpitendry zavamaneno tao Japon mankany amin'ny tany andrefana misy matetika kokoa.
Raha ny momba ireo CD tany am-boalohany, tsy nanana olana aho ka tsy mimenomenona momba izany. Mikasika ny WiFi, tsy nanana olana tamin'ny TP-Link-ko aho, soa ihany fa nanana ilay chipset Altheros nahafantatra azy tanteraka izy io, nahagaga ny fahaizany.
Amin'ny lafiny LibreOffice, mbola lavitra ny lalana alohan'ny tena mifanaraka amin'ny OOXML.
Hitako fa fanandramana tsara ny fanandramana OS samihafa. Nampiasa CPM +, DOS, UNIX, Windows 3.1 / XP aho. Tsy nampiasa MAC na Win taloha kokoa noho ny XP (afa-tsy ny Vista kely) aho. Raha misy olona manararaotra manandrana azy ary tia mampiasa azy dia avelao izy hanao izany ary raha te hampitaha izany amin'ny Linux ianao dia aleo mianatra toy izany!
Miaraka amin'ireo pako indostrialy voavonjy, miara-mipetraka amin'i Puppy sy Debian aho. Tsy milalao lalao aho ary ny ankamaroan'ny ataoko dia ny surf, tsy manana frills toa ny 8GB RAM aho (512KB no mahery indrindra). Ka miarahaba ireo izay mijery any ambadiky ny sisintany izay tsy haiko (ary tsy mikasa ny handalo) ary lazain'izy ireo amiko amin'ny fomba mahafinaritra. Misaotra anao.
Hitako fa tsy mety ilay tondro ao amin'ny lahatsoratra momba ny SO! Mampiasa Debian Stable + Mate + Iceweasel aho (raha marina ny Midori avy amin'ny lahatsoratra teo aloha).
metaly fiainana dia hoy izy:
Ny fitsikerana tena ho an'ny gnu / linux dia tsy mitombina. fa maninona tsotra fotsiny ho an'ny fisian'ny rindrambaiko openource / maimaim-poana. Ny rindrambaiko openource / maimaim-poana dia manome anao fotoana mety raha tsy tianao ny zavatra iray, raha mieritreritra ianao fa misy zavatra azo hatsaraina. Ataonao izany dia manova ny kaody ianao, tsy manome anao ny kaody tsy misy vidiny izy ireo, ary mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izany. Ary matotra raha hanome antony manosika anao hifindra amin'ny paoma ianao dia avelao izy ho marina. Ohatra, reraka tamin'ny Linux aho satria ny zava-drehetra dia atao anaty console na zavatra toa izany. Na ny olon-drehetra aza dia afaka misafidy ilay OS tadiaviny fa aza mieritreritra fialan-tsiny tsy misy antony.
Mamaly ny fiainana metaly
Na izany na tsy izany dia diso ianao, raha ny fijerinao azy, io fomba fijery io dia mihatra amin'ny programa freeware ihany koa, raha tsy tianao izany dia ampiasao hafa, na miverena amin'ny zava-misy, satria manome anao mihoatra ny anao ny fanjakana mandoa hetra ianao isan-taona8 fahasalamana, fampianarana, fanampiana ara-bola, fitaterana, fanamboarana lalana), tsy afaka mitaraina ianao satria manome anao bebe kokoa ...
Izany eritreritra izany dia tsy mitondra mankaiza, mitovy ihany ny zavatra milaza fa tsy afaka mitaraina momba ny Microsoft Windows ny olona, ​​satria tsy mandoa izany ny ankamaroany, ary manana fahalalahana hampiasa zavatra hafa ianao, ary miaraka amin'izany antony izany dia mamorona "conformism cosmic" ianao
Tsy misy toa an'i Debian Wheezy miaraka amin'ny akorandriaka Gnome miaraka amin'ny fanitarana Menu Alternative Status, ny mpampiasa Themes azo avy amin'ny Gnome-tweak-tool (napetrakao default amin'ny Debian) ary ny extension Dash to Dock (https://extensions.gnome.org/extension/307/dash-to-dock/) eo akaikin'ny lohahevitra Zoncolor (http://gnome-look.org/content/show.php/?content=156189) ary kisary Faenza (http://faenza-icon-theme.googlecode.com/files/faenza-icon-theme_1.3.zip) na ilay Elementary 3 vaovao (https://launchpad.net/elementaryicons/3.x/3.0/+download/elementary.tar.gz).
Io ilay reostia 😀
Ary ho an'ireo izay maniry ny tena BSD hametraka amboadia FreeBSD 😀
OpenBSD tsara kokoa, satria na ny Flame malware aza tsy tafiditra ao anatin'io rafitra io.
Ary io lehilahy io ihany no tsy te hianatra ny fomba fampiasana JACK miaraka amin'i Pulseaudio, apetraho amin'ny sudo apt-get install pulseaudio-module-jack ilay modely hamerina ny feon'ny karatra anatiny miaraka amin'i JACK, mihazakazaka IDJC, mampifandray ny Seranan-tsambo JACK PulseAudio Jack Sink mankany amin'ny fidiran'ny mpanampy na amin'ny fidiran'ny STR ao amin'ny QjackCtl (amin'ny tontolo misy sary, tsy ho very ao anaty console izany) avelao ny mikrô ao amin'ny IDJC ary mirakitra mivantana amin'ny flacc, ogg na mp3 amin'ny IDJC Output ny audio ny rafitra miaraka amin'ny mikrô. Mijanona ao amin'ny etsy ambony aho: raha tsy te hahay hampiasa Linux ianao dia mora kokoa ny lasa fanboy Apple voaofana tsara hanindry bokotra ao amin'ny Aqua na hikosehana ny takelaka mitomany satria tsy mandray karatra fanomezana natolotr'izy ireo azy ny iTunes. fivarotana lehibe. Misy ny tsy misy ilana azy na manome fangorahana aza.
Efa nolazaiko taminao in-4000 fa nampiasa jack miaraka amin'ny idjc aho, ary nahazo fanampiana tamin'ny radio gnu mihitsy aza aho, ary tsy vita tsara izany, ahoana no hataoko amin'ny lalao jack? Ary ny rakitsoratra firaketana an-tsoratra ny fotoana hanindriana? Tsy fantatrao ve fa tsy maintsy miasa ho anao ny solosaina fa tsy ianao ho azy?
Ary ny olana iray hafa nomen'i Jack ahy dia ny zavatra nataoko rehetra, handraikako feo ny idjc nefa miaraka amin'izay dia hihaino ny tenako aho, raha hangina aho dia ho very ny audio rehetra, tsy hosokafako indray izany na Fanomezana.
Mandehana ary mitomania amin'i shelldon izao, azo antoka fa te-hanao dingana 4000 izy, ka angamba mandeha izany na tsia, ny fombanao.
Etsy andanin'izany, satria tena hendry ianao dia manaova fampianarana amin'ity pejy ity izay handraisanao feo ao anaty ny pc sy ny mikrofonao, rehefa milalao etona ianao 😀, ho an'ny nerd toa anao dia tsy tokony ho sarotra izany
Crybaby fa tsy manandrana ianao. Efa napetrako ny tohatra ary tsy otaku aho, mainka fa ny gamer mba tsy hahafaly anao. Mba ho mpandrehitra ofisialy an'ity bilaogy ity ianao, manana hoditra marefo ianao rehefa mampatsiahy anao ny hakamoanao hikirakira, avelao ny programa, izay programa ao anaty tontolo sary. Ary tsy haiko hoe iza ilay "shelldon" na averinao in-4000 na inona na inona, ry flamer tsy mahalala na inona (na raha miteny aho hoe "s00b" angamba fantatrao ny tiako holazaina? Milelaka tsy misy ilana azy.
Lazaiko aminao fa efa niverimberina in'arivony imbetsaka noho ianao tamin'ny linux, mpamily audio, fikirakirana mpamily horonantsary, fanangonana kernel, ary tatitra momba ny bibikely, koa ajanony ny fihomehezana ary ataovy ny fampianarana mampihomehy, raha tsy izany ianao dia heveriko fa It Tsy azo atao ary mamoaka ny tratrao fotsiny ianao.
Tahaka ny ataon'ny mpampiasa sasany, ianao no karazana milaza hoe:
»Tsy misy tsy mahomby amin'ny Linux, ianao dia olona»
Ary misaotra an'ireo mpampiasa kaliberanao fa tsy mandroso ity. Misaotra nampatsiahy ahy.
Vondrom-piarahamonina io, tsy mandalo tonian-dahatsoratra ianao, raha milaza amin'ny fahendrenao ny tenanao dia asehonao anay amin'ny YouTube ny horonan-tsary nataonao, tsikelikely ny fomba handaminana idjc amin'ny jack, nefa tsy mila mihaino ny feonao manokana. ho fiverenana. Ary asehonao ahy ny fomba anaovana azy, jack sy pulseaudio miaraka amin'izay miaraka amin'ny recordmydesktop, ka ity fitaovana ity dia mirakitra ny horonan-tsary sy ireo loharanom-peo roa, ary haka sary aho, raha tsy izany dia tsy maintsy haka anao aho amin'ny "genti ary mpamory hetra "
Ary adidiko ve ny mampianatra otaku tsy misy ilana azy izay tsy afaka mirakitra ireo horonantsariny momba ny fomba filalaovany ny lalao kely mampihomehy? Raha ny marina dia ianao irery no nitory tamiko fa tsy afaka mampiasa IDJC miaraka amin'i Jack sy PulseAudio ianao (ary ho an'ny firaketana fa ny lesona dia ato amin'ity bilaogy ity ary ao amin'ny bilaogiko manokana miaraka amina fitsidihana maro) Heveriko fa tsy ary kely noho amin'ny fomba tsara anontanianao ahy. Angamba ianao dondrona toy ny ampondra amin'ny te-hampiorina hulk monstrous miaraka amin'ny sary sy / na karatra am-peo tamin'ny folo taona lasa ary aleonao mametraka OS maloto sy piraty OS X 10.6 miaraka amin'ny iAtkos alohan'ny mody azonao akory ny fikirakiran'ny IDJC. Eny ary, tena naharary anao ny nampatsiahiviko anao ny hakamoanao (sa ny tsy fahampian'ny IQ?) Mametraha zavatra amin'ny Linux; Na izany na tsy izany ny fomba tokana ianarana dia amin'ny fanaovana zavatra, fa tsy amin'ny fandikana ny bilaogy / wiki GNU Radio (mbola misy ve izany?) na amin'ny fametrahana kopia piraty an'ny Steve Jobs sy ny OS an'i Jony Ive. Angamba raha mazoto kokoa ianao ary tsy dia mirehareha loatra dia misy olona manampy anao tsy hanan-danja intsony.
Hahahahaha bravoooooo tena tsara Blade +1000
Ary adidiko ve ny mampianatra otaku tsy misy ilana azy izay tsy afaka mirakitra ireo horonantsariny momba ny fomba filalaovany ny lalao kely mampihomehy?
1- Tsy hainao ny mampiasa google
2- Tsy hainao ny manao azy
3- Ianao dia troll voamarina manana fanondroana fiaviana.
Ahh sy izay lesona nataonao ho an'ny PC-ko, tsy nahavita ny asany izany: D, ankoatr'izay dia efa misy fampianarana mitovy amin'izany amin'ny Internet ary tsara kokoa.
Ary ny pc-ko tsy tamin'ny folo taona lasa, tsia tompoko, mety matanjaka noho ny anao sy ny zava-drehetra pc io
Wisp. Raha miaraka amin'ireo olana kely momba ny fikirakirana ny rafitra sy ny rafitra isika ... Mieritreritra aho fa ny rafitra GNU / Linux dia tsy hiala amin'ny bubble malaza 1% amin'ny solosaina birao.
Tokony ho tsaroana fa tsy izay rehetra mampiasa solosaina dia teknisiana, nahazo diplaoma na injenieran'ny rafitra hiatrika olana izay amin'ny tenany dia tena fototr'izany fotoana iray izany.
Ary miresaka momba ny fanamiana otaku fanboys antieverything:
Etsy an-danin'izany, ity no tiako hataonao mba hampisehoana amiko fa afaka manao izany ianao
Misy olon-kafa nilaza tamiko mba hampahafantatra azy ireo raha afaka manao izany ianao.
Eny ary, tsy te hanome sakafo ilay flirman tsy misy ilana azy aho fa ho tombontsoan'ny olombelona dia omeko anao ny lesonao:
Tongasoa ianao, andao hizaha raha misy zavatra ianaranao.
raha tsy tokony omenao ny mombamomba ny PC-nao mba tsy hitaraina momba an'io intsony io zaza io, na dia mazava ho azy aza dia hiteny izy fa mandroso kokoa ny solosainy hahaha raha jerena ny fahatokisany tena.
Izy io dia PC mahazatra mitam-piadiana miaraka amin'ny tanako keliko (Pentium amin'ny 2.7 ​​Ghz, 4GB RAM, kapila mafy 250 GB, zarazaraina amin'ny karatra audio sy audio audio (Gygabyte H12.04M-DS11) tsy misy karatra hafa (Gygabyte H61M-DS2) . hilalao kilalao kely adala toa an'i moron otaku. Ka izay mahay mamaky dia mahavita azy.
Brizno tena tsara, toa nikatona vava indray mandeha io nerd infectious io, antenaina fa homen'ny ray aman-dreniny vola tiany hividianana Mac malalany izy ary ajanony ny fikorontananany aminay amin'ny fitiavany mora vidy sy avonavona, ary rehefa mandeha izy dia handeha hanoratra ho an'ny assholes toa ny appleweblog, applesfera na inona no fantatro.
Lahatsary mahafinaritra, @Brizno. Inona koa, hapetrako izy io mba hahafahako manao ny screncast mba hahafahako manao ny tutorial ho an'ny GNU / Linux (rehefa mampiasa Debian Stable miaraka amin'ny GNOME 3.4 Fallback ao amin'ny HP Workstation nohamariniko ho an'ny Windows Vista izay ampiasako ihany koa ary amin'ny kapila mafy).
Na izany aza, JACK dia hita fa tena intuitive kokoa noho ny rafitra fandraisam-peo hafa ao amin'ny GNU / Linux. Ny fanajana ahy.
Esory amin'ny bilaogy ity crybaby ity, azafady Elav, aza avela handefa bebe kokoa izy isaky ny manao adala adala toa ireny !!! Tsy misy fandikan-dalàna izay mampiseho fahamatorana kely amin'ny lise (pandev92)
candelaria dia hoy izy:
Salama, manandrana mametraka iTunes amin'ny chromebook-ko aho ary tsy afaka ... afaka manampy ahy ve ianao? Misaotra anao!
Mamaly an'i candelaria
Script hanala otrikaretina virtoaly amin'ny fitaovana USB mifandray
Pisi Linux Beta voalohany azo